လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တည်မှုဖြစ်လာခြင်း - ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 'အခန်းထဲရှိဆင်' (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
Volume ကို 25ဇွန်လ 2017, စာမျက်နှာများ 209-220
စာရေးသူလင့်များပွင့်လင်းပြသမှု panel ကAhna BallonoffSuleimanaAdrianaGalvánbK. PaigeHardencရော်နယ်အောင်နိုင် E.Dahla
•မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေး neuroscience အတွက်တိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်နည်းနည်းအာရုံစိုက်ရှိခဲ့သည်။
• pubertal ရငျ့၏ဘောင်ရင်ခုန်စရာနှင့်မျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုအဖြစ်လိုအပ်သော pubertal ဦးနှောက်ရငျ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
• Developmental မှ neuroscience, ရင်ခုန်စရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးရလဒ်များတိုးတက်လာဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စတင်ခြင်းလေးနက်တဲ့လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အပြောင်းအလဲသိမှတ်ခံစားမှု, အပြုအမူများနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆဲ neurodevelopmental မော်ဒယ်များဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုပေါင်းစည်းကြပါပြီ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု; သို့သော်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရေးပါမှုအပေါ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းနည်းအာရုံစိုက်ရှိခဲ့သည်။ လူငယ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရိုက်ထည့်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်များကိုတဦးကသူတို့ကိုရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးမြားတှငျပါဝငျခွငျးအပါအဝင်လူကြီးများ၏လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန် neurodevelopmental စာပေပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်, ဒီစက္ကူပျေါလှငျဘယ်လိုငါတို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းစွာအပျိုဖော်ဝင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျော်လွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားရငျ့များအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း somatic ပြောင်းလဲမှုများကိုအစုတခုရွှေ့သင့်ပါတယ်။ အစား, အပျိုဖော်ဝင်လည်းများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း neurobiological ပြောင်းလဲမှုများကိုအစုတခုကပါဝင်ပတ်သက် မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောလူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်သိမြင်မှုရငျ့။ ဤစာတမ်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကျန်းမာရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သုခချမ်းသာ၏အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအဖြစ်လိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏နားလည်မှုတိုးတက်၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ပတ်သက်. သုတေသနအခြေစိုက်စခန်းနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုထပ်တိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။
"ငယ်စဉ်ကလေးဘဝခုနှစ်တွင်လူများ Natal မိသားစုအပေါ်သူတို့ရဲ့အလွန်အသက်အဘို့အမူတည်; လူကြီးအတွက်, သူတို့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများ၏သုခချမ်းသာနှင့်အိမ်ထောင်ရေးမိသားစုများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အနေအထား pursing တာဝန်ရှိသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အကျဉ်းချုပ်ကိုကာလအဘို့, သူတို့ကသူတို့ဖွစျလိမျ့မညျသကဲ့သို့တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်မဟုတ်သလိုအဖြစ်မဒါမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ရွယ်တူဆက်ဆံရေးဟာသူတို့ဘဝသံသရာအခြားအဆင့်မှာအားနည်းနေလိမ့်မည်ပူးတွဲမှုတစ်ခုပြင်းထန်မှုအပေါ်ယူနိုင်ပါသည်ထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ် ... "- (Schlegel နှင့်ဘယ်ရီ, 1991 Schlegel & Barry III ကို, 1991, p ။ ၆၈)
Neurodevelopmental မော်ဒယ်များလေးနက်တဲ့လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အပြောင်းအလဲသိမှတ်ခံစားမှု, အပြုအမူများနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနေတဲ့အချိန်အဖြစ်, အပျိုဖော်ဝင်စဇီဝဗေဒအကူးအပြောင်းများကမှတ်သားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စတင်ခြင်း, ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များ (Self-သက်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုထွန်းသစ်စသစ်ကိုလူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့လူမှုရေးနဲ့စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှုလိုအပ်သောအထူးသဖြင့်, သင်ယူမှုတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလအဖြစ် peripubertal အချိန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့Telzer 2016; Crone နှင့် Dahl, 2012) ။ သို့သျောလညျးအဘို့အပျိုဖော်ဝင်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြအများအပြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်များပေါ်ပေါက်ရေးရှိနေသော်လည်း အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အသစ်, သပ္ပါယ်သင်ယူမှု (ဥပမာ (Blakemore 2012; Braams et al, 2015 ။ Crone နှင့် Dahl, 2012; Giedd et al, 2006 ။ ဂျိမ်း et al, 2012 ။ Peper နှင့် Dahl, 2013), ဤအမော်ဒယ်များရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရေးပါမှုကိုကန့်သတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်သည်ဤဖွံ့ဖြိုးရေးမော်ဒယ်တွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသောအခါအနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်, သူတို့ကအနုတ်လက္ခဏာအန္တရာယ်အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအန္တရာယ်-မူဘောင်) အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအလေးပေးလေ့ (Ewing et al, 2014 ။ Goldenberg et al ။ 2013; ဂျိမ်း et al, 2012 ။ ဗစ်တာနှင့် Hariri, 2015) ။ ကျနော်တို့အန္တရာယ်များသို့မဟုတ်မဆင်မခြင်နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာလဲစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုပေမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဒါကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စံတန်ဖိုးကျန်းမာရှုထောင့်နှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ၏ neurodevelopmental ကျောထောက်နောက်ခံပြုစဉ်းစားရန်အညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မူဘောင်ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကျန်းမာရေး-ထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်နောက်ခံအာရုံကြောဆက်စပ်အချို့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဤလေ့လာမှုများစံတန်ဖိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘယ်နေရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်အနည်းငယ်သာပွုပါပွီ။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင်တက်ကြွအဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက် (15-17 နှစ်ရှိပြီ) အကြား, Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်၏ activation နှင့်အတူအဆိုးဆက်စပ်တာ prefrontal cortex တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးတာဝန်စဉ်အတွင်း (PFC) (Goldenberg et al ။ , 2013) ။ အလားတူပင် 14-15 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးလေ့လာမှုတစ်ခုဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်တစ်ဦးက high-အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်အောင် anterior cingulate (Hensel et al ။ , 2015) ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြု သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး အဆိုပါ anterior cingulate အတွက်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်ဒီထက်အသက်သွင်းနေစဉ်ပိုပြီးတာဝန်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချပေမယ့်စံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်နည်းနည်းလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ neurodevelopmental သုတေသနအတွက်အန္တရာယ်မူဘောင်ထက် ကျော်လွန်. Moving အပြုသဘောရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ထုတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေရှာဖွေစူးစမ်း neurodevelopmental လေ့လာမှုများ၏လက်တဆုပ်စာအပြင်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏စံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံကိုစူးစမ်းဖို့ကန့်သတ်အားထုတ်မှုရှိခဲ့သည်။ လူငယ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရိုက်ထည့်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်များကိုများထဲမှစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမြားတှငျပါဝငျခွငျးအပါအဝငျသူတို့ကိုလူကြီးများ၏လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည် (Crone နှင့် Dahl, 2012) ။ လူနှစ်ဦးအနည်းငယ်သာအပြန်အလှန်မယ်ဘယ်မှာမူလတန်းကျောင်း Crush ကနေအထိလူငယ်တွေကရဲ့ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, အချိန်နှင့်စွမ်းအင်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါဝင်ကြောင်းဆက်ဆံရေးမှမကြာခဏအရေးအဖြစ်ပယ်ချနေကြသည်။ တကယ်တော့အဲဒီဆက်ဆံရေးအရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအစေခံများနှင့်လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အမြတ်စူးစမ်းရန်အဘို့အမူလတန်းအခြေအနေတွင်ရှိပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (Furman နှင့် Shaffer, 2003; Furman et al ။ , 2007) ။ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းရရှိမှုနှင့်နှစ်လိုဖွယ်မိတ်ဖက်များ၏အဖော်အနိုင်ရတဲ့၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်, မြီးကောင်ပေါက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးထူထောင်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအပြန်အလှန်သွားလာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ကြသည်။ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်လိင်နှင့်မျိုးပွားဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးကြောင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တစ်ဦးကလူတစ်ဦး၏စွမ်းရည်ကိုအပျိုဖော်ဝင်၏စံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အပျိုဖော်ဝင်စ, ဦးနှောက်ထဲမှာစတင်မယ့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို, (နောက်ဆုံးတွင်မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်လေးနက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မအသွင်ပြောင်းတဲ့အဆငျ့ဆငျ့ကပါဝင်ပတ်သက်Sisk 2016; Sisk နှင့် Foster, 2004) ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒ, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်ပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင်လူကြီးလိင်အချို့ဒြပ်စင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ အပျိုဖော်ဝင်မိတ်လိုက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလှုံ့ဆျောသော်လည်း, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာရှာဖွေစူးစမ်းအလွန်ကန့်သတ်သုတေသနရှိခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြအခြားမျိုးစိတ်ပေါ် pubertal သုတေသနဤဝတ္ထုအပြုအမူတွေပေါ်ပေါက်ရေးဦးနှောက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ကြီးမားညှိနှိုင်းလိုအပ်သည်အသိအမှတ်ပြု, အပျိုဖော်ဝင်စနဲ့ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူစတင်ခြင်း၏ In-depth တူးဖော်ရေးပါဝင်သည် endocrine စနစ်ကနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏။ ကဲ့သို့သော, တိရစ္ဆာန်သုတေသီများအမူအကျင့်ရလဒ်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်းအာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်း function ကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပုံဖော်ကြောင်းဖြစ်စဉ်သွင်းအားစု (ဥပမာအဖြစ်သာအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရိပ်မိ Nutsch et al ။ , 2014, 2016; et al ။ , 2015 လိမ့်မည်) ။ သင်ယူမှုနှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ချက်လူ့မိတ်လိုက်စတင်ခြင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက် loops နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းကိုသိကျွမ်းရာအစာခေါငျးပါးလူ့ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လက်ရှိမော်ဒယ်အတွက်အရေးကြီးသောကြီးကြပ်မီးမောင်းထိုးပြ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲနားလည်သဘောပေါက်သို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ကြဘူး, မသူတို့ဝိသေသလက္ခဏာကဤအရေးကြီးသောလူမှုရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်များမှသက်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ပါ။ ထိုမှတပါး, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏မိတ်လိုက်မူဘောင်တစ်ခုတည်းကိုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ကွဲမူဘောင်ကမ်းလှမ်း, ဤသို့လူ့လိင်အတွက်ဆွဲဆောင်မှု, အပြုအမူများနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာပစ္စုပ္ပန်၏မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့လျော့ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကန့်သတ်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်စာပေအကြီးအကျယ်လူ့ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မော်ဒယ်များအတွက်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြရာအပျိုဖော်ဝင်များ၏ဇီဝရည်ရွယ်ချက်၏အရေးပါသောသတိပေးခကျြမြားနှငျ့ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ချက်ကွင်း, အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်ကန့်သတ်လူ့သုတေသနအပျိုဖော်ဝင်သည့်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုပုံစံသွင်းသွင်းပုံကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့နည်းနည်းပြုကြပြီ အဓိပ်ပာယျ ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ (Fortenberry, 2013) ။ တဦးတည်းလက်တွင်, မှေးဖှားနိုငျအပြုအမူများအတွက်အခြေခံစွမ်းရည်အတော်လေးနည်းနည်းကျွမ်းကျင်မှု, အသိပညာသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်; အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေနားချင်းဆက်မှီအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အောင်မြင်မှုကိုဆွဲဆောင်အတွက်လူမှုရေးယှဉ်ပြိုင်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပြုအမူတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီး set ကို၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုနေရသည်။ အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသည့်လိမ်ယှက်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားသွားလာရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာလိုအပ်သောလေးလည်းဖို့သင်ယူခြင်းသက်ဆိုင်ရာလူမှုရေး, အကျိုးသက်ရောက်စေ၏စံတန်ဖိုးလမ်းကြောင်းမှအမာခံများနှင့်လူသားများတွင်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, pubertal ရငျ့ (နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာအပြုအမူအတွက်အကျိုးစီးပွားအပါအဝင်လူမှုရေးအရင်းခံများတွင်သဘာဝတိုး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. , ဒါပေမယ့်လည်းရှုပ်ထွေးသောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ရိုးရိုးလေးသင်ယူခြင်း-မယ့်စံတန်ဖိုးဝင်းဒိုးကိုကိုယ်စားပြုဖွယ်ရှိသည် တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးဆဲမှာပါဝင်နေတဲ့စွဲချက်တင်, High-ပြင်းထန်မှုစိတ်ခံစားမှုသွားလာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း။
ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့အပျိုဖော်ဝင်စမှာဖြစ်ပေါ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုသွားလာရန်သက်ဆိုင်ရာကြီးထွားသင့်လျော်သောသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းထူးခြားတဲ့ဝင်းဒိုးကိုဖန်တီးပုံကိုသိမြင်မှုနှင့်လူမှုရေး-ထိခိုက်စေစူးစမ်း။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲမှုများအခြေခံကြောင်းအဆိုပြု အာရုံကြော circuitry လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်မေတ္တာနှင့်ပူးတွဲမှုဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဘို့ (အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်တဦးတည်းကိုအောက်ပါ) ဒုတိယဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ window ကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်သောဤသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များလှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသော pubertal ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူစတင်ရသေးဤအချိန်ကာလအတွင်းအခြေအနေတွင်နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုဖြစ်ကြောင်း hypothesize ။ ထို့နောက်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့သုတေသနနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ဆွဲ, ငါတို့အပျိုဖော်ဝင်ချုပ်လူငယ်များမှာဟော်မုန်း, အာရုံကြောများနှင့်ဇီဝအသွင်ကူးပြောင်းမှုရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလူကြီးများ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကနေ ပို. ပို. uncoupled လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်သည့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး elongated ကြောင့်ထိခိုက်ဘယ်လိုအပါအဝင်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာအကြောင်းကိုအချို့သောအရေးကြီးသော, ထူးချွန်မေးခွန်းများကို, ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ စက္ကူတစ်လျှောက်လုံး, ငါတို့သည်လည်းအဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေများစွာလေ့လာစူးစမ်းဖို့သုတေသီများအဘို့အခွင့်အလမ်းကိုဖေါ်ထုတ်။ ဤစာတမ်း၏အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်သည်ဤအရေးပါဘယ်နေရာတွေမှာလဲတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အသုံးပြုခံရဖို့မှ neuroscience သုတေသနများအတွက်အလားအလာခိုင်ခံ့စေ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်သုတေသနအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုကိုထပ်တိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။
2 ။ မတ်ေတာ, Bond နှင့်ရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူရန်မျှော်လင့်
အတော်များများက neurodevelopmental မော်ဒယ်များကတော့ကြောင့်မီးမောင်းထိုးပြ neuroplasticity အပျိုဖော်ဝင်စမှာဖြစ်ပေါ်သင်ယူခြင်း၏ထူးခြားသောအမျိုးအစားများအဘို့အရာချုပ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအထိခိုက်မခံပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ် (Crone နှင့် Dahl, 2012) ။ ယင်း၏အကျယ်ပြန့်ပါသည်, ထိုအသုံးအနှုန်းမှာတော့ neuroplasticity အထူးပြုလေ့လာသင်ယူမှုအတွက် 'အထိခိုက်မခံပြတင်းပေါက်' '၏အယူအဆနှင့်အတူသင်ယူမှု instantiate ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်များကိုအထောက်အကူပြုကြောင်း Synaptic နှင့် Non-Synaptic ဖြစ်စဉ်များ၏ကျယ်ပြန့ပါဝင်သည်။ Greenough et al ရဲ့ (1987) အစောပိုင်းကလေးဘဝ '' အတွေ့အကြုံကို-မျှော်မူဘောင် 'ဆိုတဲ့မွေးကင်းစကလေးဦးနှောက်သဘာဝကျကျအတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူထပ်ခါတလဲလဲအလေ့အကျင့်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူတို့ကိုလှုံ့ဆျောပေးသောသင်ယူမှု၏တိကျသောအမျိုးအစားများ, (ဥပမာလမ်းလျှောက်) မျှော်လင့်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်း။ ဤရွေ့ကားသင်ယူခြင်းအတွေ့အကြုံများ, အလှည့်အတွက်အရေးပါကိုအထောက်အကူပြုရန် အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ (Greenough et al ။ , 1987) ။ ယင်းသို့မကြာမီကသုတေသန မော်လီကျူးဖြစ်စဉ်များ နှင့် neuroplasticity ၏ယန္တရားများလျှင်မြန်စွာတိုးတက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်မီးမောင်းထိုးပြထားသည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းနှင့်အတူစတင်, တည်ငြိမ်မှုနှင့် plasticity တစ်မူထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပုံဖော်ဖို့သင်ယူမှုနှင့်အတွေ့အကြုံအတွက်အခွင့်အလမ်း၏အရေးပါသောဝင်းဒိုးကိုဖန်တီး အာရုံကြောကွန်ရက်များ နည်းလမ်းများ (တည်မြဲအတွက်Hensch 2014; Takesian နှင့် Hensch, 2013; Werker နှင့် Hensch, 2015).
ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အတိုးဖို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာနေသောအပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်-အပြောင်းအလဲနဲ့စီးဆီသို့ re-orient သာ. ကွီးမွတျအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် salience ဟန်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Dahl 2016; နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2016) ။ ပိုများသောအထူးသ, အပျိုဖော်ဝင်ဝတ္ထုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင် လူမှုရေးအပြုအမူတွေ နှင့်အသစ်ပေါ်ထွက်လာလူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှတုံ့ပြန်မှု (ဘရောင်း et al ။ , 2015) ။ လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းအတူ ပို. ပို. ထက်ပိုအချိန်ဖြုန်းရန်စတင်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ဆက်ဆံရေးဟာ-လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အပြုအမူလှုံ့ဆော်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုသစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုခံစားရသည်။ အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဇီဝရည်ရွယ်ချက်မျိုးပွားမှုရင့်ကျက်အောင်မြင်ရန်ကြောင်းပေးထားသောကြောင့်တမူထူးခြားတဲ့ peripubertal အတွက် plasticity နှင့်တည်ငြိမ်ရေးတို့အကြားချိန်ခွင်လျှာကြောင်းသဘာဝကျပါတယ် အာရုံကြောစနစ်က သင်ယူမှုနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဝင်းဒိုးကိုဖန်တီးလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များသွားလာတစ်လူစိမ်းနှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထကြုံနေရ, ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကမှထွက်မမေးနိုင်ရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှ related စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပါအဝင်, ဒီဒိုမိန်းအတွက်လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်သောကျွမ်းကျင်မှုကိုစဉ်းစားပါ ငြင်းပယ်ခံရနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသို့မဟုတ်တက်ကိုချိုးဖျက်နှင့်ရှိသည်ဖို့ဇီဝအလိုဆန္ဒဟန်ချက်ညီ, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလူကြိုက်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်အတူဆက်နွယ်ရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုအတူ။ အစောပိုင်းရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုရာသက်ပန်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲကူညီပံ့ပိုးရန်နည်းလမ်းများကိုအမြဲတည်သောအတွက်အာရုံကြောကွန်ရက်များဖွံ့ဖြိုးလာဖွယ်ရှိပုံစံမျိုးစုံ၏ကျယ်ပြန့်။
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဖြစ်ပေါ်အရေးကြီးဆုံးအကူးအပြောင်းတစ်ခုမှာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုဆန္ဒဖြစ်ပါသည် ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ မွေးကင်းစအစောပိုင်းအသက်တာ၌တည်ငြိမ်ပူးတွဲမှုနှင့်မိဘ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးကိုသင်ယူသွားရမည်အကြောင်း, ကလူငယ်များရင်ခုန်စရာမေတ္တာ၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာသော pubertal အကူးအပြောင်းစတင်ခြင်းပြီးနောက်သည်အထိမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရေးပါသောပူးတွဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ် conceptualized ခဲ့ပြီးနှင့်လူကြီးများ '' ရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှုစတိုင်များမကြာခဏသူတို့မွေးကင်းစ (အဖြစ်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူကြုံတွေ့အဆိုပါစတိုင်များ mirrorHazan နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, 1987) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်မိဘ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှစ်ခုလုံးနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးလွယ်ကူချောမွေ့, ဤခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်အပြုသဘောနှင့်ကြိုးအတွေ့အကြုံများ (Bartels နှင့် Zeki, 2004) ။ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောထပ်နေသော်လည်းအရည်အသွေးတွေ, neurohormone binding က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အာရုံကြောမိဘနှင့်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြားဆက်နွယ်နေပါသည်, အရေးကြီးသောဘာသာဂုဏ်ထူး (လည်းရှိပါတယ်Bartels နှင့် Zeki, 2004) ။ မိဘနှင့်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့, အထိခိုက်မခံ, တုံ့ပြန်မှုအိမ်စောင့်, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်အာဏာခွဲဝေမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဖြစ်ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများ, ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲချုပ်ဦးနှောက်မိတ်လိုက်ကလေးမွေးခြင်း, ကလေးထိန်းလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်, မတ်ေတာ၏ဤအသစ်ကအမျိုးအစားတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့ကြောင်းအာရုံကြောအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းတင်ပြသည်။
ဒါကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြောစနစ်များအများအပြားသိသိသာသာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ဆက်သွယ်မှုခံယူမြဲမြံစွာတည်ခြင်း, အလုပ်လုပ်တဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း, နည်းနည်းဒီစံတန်ဖိုးရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းနှင့်အတူဖြတ်ဘယ်လိုလူသိများသည်။ အဆိုပါအာရုံကြောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းများ pubertal neurodevelopment အချက်များအပေါ်စာပေနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ / arousal အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုပေါင်းစပ်။ ဒါကြောင့်စာပေ၏ဤခန္ဓာကိုယ်အနှစ်ချုပ်ဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopmental မော်ဒယ်များရှင်းရှင်းလင်းလင်း (အပျိုဖော်ဝင်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်၏သိသာထင်ရှားသောလိင်-တိကျတဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသရုပ်ပြပါပြီDennison et al, 2013 ။ Giedd နှင့် Denker, 2015) ။ ဤအဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းအားလုံးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် (သင်ယူခြင်းဆုချမှ sensitized နေကြတယ်သွပ်ရည်စိမ်, 2013) ။ dopamine ကြွယ်ကိုသက်ဝင်ခြင်းအားဖြင့်, ရည်မှန်းချက်-oriented တွန်းအားအားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု (ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံး, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကိုဆုချAron et al, 2005 ။ Fisher က et al ။ , 2010) ။ အပျိုဖော်ဝင်စက, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ကွန်ရက်မှာအသွင်ကူးပြောင်းမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်လူမှုရေး-စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖွယ်ရှိအပြုသဘောဆုလာဘ်အဖြစ်ကြုံတွေ့ခံရဖို့ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်စိတ်နိုးထတစ်မူထူးခြားတဲ့တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအမှတ်ဖန်တီးပါ။
မေတ္တာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှစ်ခုစလုံးတကမ္ဘာလုံး (သိမှတ်ခံစားမှုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကို dopamenergically-mediated လှုံ့ဆျောမှုပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်စိန်နှင့် Dickenson, 2012) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှုပေးထားသောနှင့် သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဒါကြောင့် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်အတူဆက်စပ်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အခှငျ့သာအချိန်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီCollins, 2003) ။ ဤရွေ့ကားသစ်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များသိသိသာသာလူငယ်ကအခြားအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေ (၏ Self-စည်းမျဉ်းတစ်ခုတိုးလာစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောတစ်ချိန်တည်းမှာ salience တိုးပွါးFortenberry, 2013) ။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့တိုးမြှင့်အာရုံကြော plasticity နှင့်အလွန်အမင်းနှိုးဆွသော, အနည်းငယ်ကြောက်စရာအလွန်အကြိုး, ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများတဲ့အကွာအဝေးထွက်ရှာတဲ့ကြီးထွားလှုံ့ဆျောမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းသဘာဝကျပါတယ်နှင့်အာရုံခံစားမှုအတွက်တိုးရှာကြံဤ high- ကိုရှာဖွေမြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အောင် ပျော်စရာထိုကဲ့သို့သောပထမဦးဆုံးအရူးအမူးရှိခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ပထမဦးဆုံးနမ်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဖြစ်ပြင်းထန်မှုအတွေ့အကြုံများ, (ပီးလ်ဘာ့ဂ် et al ။ , 2014) ။ ၏ Co-လွှတ်ပေးရန် dopamine နှင့် oxytocin တိကျတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ interaction ကသူနဲ့ဆက်စပ်ရင်ခုန်စရာအပြုအမူတွေအကြောင်းကိုနောက်ထပ်ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။ လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးတစ်ဦးအရူးအမူးရှိပြီးသူတစ်ဦးဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်စတင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ရသောတစ်ဦး conditional မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုး dopaminergic ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းထားသည်နှင့်အကြောင်းတိကျသောကပ်လျက်တည်ရှိမိတ်ဖက် (နဲ့အတူကြီးမြတ်ဆုံးကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်2013 Love; Ortigue et al ။ , 2010) ။ အားလုံးသင်ယူမှုနှင့်အတူအမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, အချိန်အဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲအတွေ့အကြုံကိုကြာပါသည်။ ဒီဖက်-တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုနှိုးဆွသောမြားတှငျပါဝငျခွငျး, ထူထောင်ခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့ဝတ္ထုလှုပ်ရှားမှုများစုံတွဲများကြားတွင်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုများတိုးမြှင်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီး (Aron et al ။ , 2000) ။ သောကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်စောစောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်မိတ်ဖက်-တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယှငျးနှစ်ဦးစလုံးဝတ္ထုဖြစ်သည့်အခါ, သူတို့ကိုအထူးသဖြင့်, စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြိုးများနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာစေသည်။ အောင်မြင်စွာရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အလို့ငှာ, ဆယ်ကျော်သက်ချဉ်းကပ်မှု, တူ, လိုခငျြနှင့်မေတ္တာစိတ်ကျသွားကျိုးနှလုံးကြုံနေရ, တဖန်ကြိုးစားနေတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကမှထွက်တောင်းဆိုနေတာ၏မြင့်-လောင်းကြေးလှုပ်ရှားမှုများကနေသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြောင်းအလဲနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ် dopamine ကြွယ်ဝ subcortical ဒေသများတွင်တိုးမြှင့် activation ကပါဝင်ပတ်သက်; သူနဲ့ဆက်စပ် higher-အလို့ငှာ cortical ဦးနှောက်ဒေသများတွင် လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု နှင့် Self-ကိုယ်စားပြုမှု; နှင့်ထဲမှာ activation လျော့နည်းသွား amygdala (Ortigue et al ။ , 2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ / arousal နှင့်ချစ်ခြင်းအထူးသဖြင့် subcortical ဒေသများတွင် activation အများအပြားထပ်ဒေသများ, ပါဝင်ပေမယ့်, activation ၏ကွဲပြားသောဒေသများတွင်လည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာ, နှစ်ဦးစလုံးတစ်စုံတစ်ဦးကမတ်ေတာတျော၌တက်ကြွစွာနေစဉ် နှင့် သူတို့တစ်တွေချိုး-Up ထဲကနေငြင်းပယ်ခံရပေမယ့်မပေးလိင်စိတ်နိုးထ, လိင်စိတ်နိုးထသော်လည်း, (ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်မွေ့, အာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုလိုက်ရန်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်) ventral tegmental activation ကပါဝင်ပတ်သက်တွေ့ကြုံ, ဒါပေမယ့်မချစ်, ventral ကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပြီးနောက် striatal (လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်စပ်) activation (Fisher က et al, 2010 ။ စိန်နှင့် Dickenson, 2012) ။ ကြောင့်စကင်နာများအတွက်သင့်လျော်သောတာဝန်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ကန့်သတ်ခြင်း, neuroimaging သုတေသနအောင်မြင်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု-ကနေလိင်စိတ်နိုးထ-တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေတနာ၏ဇီဝကမ္မပြည်နယ် (လိုက်ရန်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ-တစ်သိမြင်-mediated လှုံ့ဆျောမှုပြည်နယ်မပေးရှိပါတယ်စိန်နှင့် Dickenson, 2012) ။ အများစုမှာဓါတ်ခွဲခန်း Paradigm သူစိမ်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထက်ချစ်ရသူကိုသုံးပါနှင့်, အရှင်ဖွယ်ရှိပိုကောင်းဆန္ဒထက် arousal ကိုယ်စားပြုသို့သော်ဤမရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမတ်ေတာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအပေါ်သုတေသနမယုံနိုင်လောက်အောင်ကန့်သတ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအမှတ်ပေးထားပါတယ်။ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်စိတ်နိုးထပေါ်ပေါက်ရေးအထောက်အကူပြုသောအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာလဲဖုံးကွယ်သောဤစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ကူညီနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အပျိုဖော်ဝင်စမှာဖြစ်ပေါ်ပုံကို neurodevelopmental အသွင်ကူးပြောင်းမှုအထုပ်စေရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းသုတေသနအလိုဆန္ဒ, စိတ်ကူးယဉ်မတ်ေတာ၏အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်လိင်ကိုအလွန်အပျိုဖော်ဝင်များ၏တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအချက်သည်ဤရှုပ်ထွေးလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဘို့ထူးခြားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဝင်းဒိုးကိုဖန်တီးပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးမြှင့်မယ်လို့ ။
မဆိုအရေးကြီးသောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျှလူငယ်များအထောက်အကူရှိခြင်းနှင့်အပြုသဘောဘယ်နေရာတွေမှာလဲလွယ်ကူချောမွေ့ရန် scaffolding မှအကျိုး။ ကျနော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုသက်ဆိုင်ရာအပြုသဘောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများအထောက်အကူပြုသောအခင်းအကျင်းများနှင့်အခြေအနေများ၏နားလည်မှုအဖြစ်အပျက်သဘောဘယ်နေရာတွေမှာ၏အန္တရာယ်များကို minimize သောသူတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဖို့သင်ယူခြင်း (နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်ကျ) သူထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကများအတွက်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်ပေး၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သကဲ့သို့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲနေချိန်မှာကျနော်တို့စူးစမ်းနှင့်၎င်းတို့၏အစွမ်းထက်အလိုဆန္ဒများနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့လူငယ်ကိုကူညီသောစောဒနာပတ်ဝန်းကျင်မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိုးနိုင်ပါတယ် ဤအခံစားချက်များကိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နှင့်၎င်းတို့၏ Self-ဝိသေသလက္ခဏာသို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်ဘို့။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံအလိုဆန္ဒ, ဆွဲဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ် arousal ၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခံစားချက်တွေကိုကြုံနေရသူတွေကိုနှင့်ပြီးသားနေသောသူတို့ကိုအပါအဝင်အားလုံးလူငယ်များအဘို့ဤအမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုသင်ယူခြင်းအတွေ့အကြုံများ၏နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ကိုကျန်းမာဗားရှင်း, ငြမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုငျ ချိန်းတွေ့နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်တက်ကြွ။
3 ။ Pubertal ဟော်မုန်း, neurodevelopment နှင့်အပြုအမူ
ဟော်မုန်းတိုးအဆိုပါ pubertal အကူးအပြောင်းတစ်ခုအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုသောတူညီဟော်မုန်းလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ အာရုံကြော circuitry (Schulz နှင့် Sisk, 2016; Sisk 2016; Sisk နှင့် Zehr, 2005) ။ ရလဒ်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်ထွက်ရှာ သာ. ကွီးမွတျလှုံ့ဆျောမှု, ဆုလာဘ်များတိုးမြှင်အတွေ့အကြုံ, နှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအပါအဝင်ရင်ခုန်စရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုးလာလှုံ့ဆျောမှုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Crone နှင့် Dahl, 2012) ။ ထို့အပြင် pubertal ဟော်မုန်းမြင့်မား-ပြင်းထန်မှုဝတ္ထုခံစားချက်တွေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ဖွယ်သောအာရုံခံစားမှု-ရှာထဲမှာတိုးရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျော်လွန်. gonadal ဟော်မုန်းအခြားဟော်မုန်းတစ်ခုနံပါတ်နှင့် neurotransmitters activated သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းနှင့်ဘယ်လိုလူတွေအတွေ့အကြုံကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ် ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအပါအဝင် oxytocin, vasopressin, dopamine, serotoninနှင့် cortisol (de Boer et al ။ , 2012) ။ pubertal ဟော်မုန်းအတွက်တိုးမြှင့်လူမှုရေးအရ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ခံစားချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်အဖြစ်ဥပမာ, dopamine နဲ့ oxytocin အတွက်တိုးမြှင့်မေတ္တာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုခံစားချက်များကိုတိုးပွား (မတ်ေတာ, 2013) ။ စုပေါင်း, ဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitters တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူအတွက်လူငယ်များရဲ့အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်ဦးစံပြဇီဝကမ္မရာသီဥတုဖန်တီးပါ။ အောက်တွင်ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ် ပို. တိတိကျကျဘယ်လိုနှစ်ခု key ကို pubertal ဟော်မုန်းအပေါ်ရလဒ်များ - testosterone ဟော်မုန်း နှင့် estradiol - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေ။
3.1 ။ testosterone
testosterone အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းရှာကြံလူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မကြာခဏကျူးကျော်စပ်လျဉ်း၏ထင်, testosterone ဟော်မုန်းကိုလည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားယန္တရားများ, အရေအတွက်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, ခြိမ်းခြောက်မှုမှတဆင့် status ကို-ရှာခြင်းနှင့်အဆင့်အတန်းကို-ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြုအမူတွေကိုလှုံ့ဆျောမှု, တစ်လူမှုရေးဟော်မုန်းအဖြစ်ဖော်ပြထားသည် ရွှင်လန်းတိုးမြှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအနေနှင့်ဆုလာဘ် (Eisenegger နှင့် Naef, 2011) ။ testosterone ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal တိုးထဲမှာခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုမှအာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ amygdala (ခြိမ်းခြောက်မှုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့ဆက်စပ်) နှင့် နျူကလိယ accumbens (ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်) (ပီးလ်ဘာ့ဂ် et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိုးမြှင့ testosterone ဟော်မုန်း (ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအကြားဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်များကိုအပေါ်ပိုမိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကအေဲနျဂြီက de Mack et al, 2011 ။ Peper နှင့် Dahl, 2013) ။ ကျယ်ပြန့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပွနျလညျဖှဲ့စညျးဖြစ်ကြောင်းလူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်-processing ဦးနှောက်ကွန်ရက်များဖြစ်ကြသည်သောနျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala, (testosterone ဟော်မုန်း receptors ၏ကြီးမားသောလူဦးရေများနယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကား testosterone ဟော်မုန်း-related ဖြစ်စဉ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားလုံးကိုဖွယ်ရှိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြောင်းအလဲများကို။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အဆိုပါများအတွက်အထိခိုက်မခံကာလသောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီ အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ gonadal ဟော်မုန်း၏, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ gonadal ဟော်မုန်းဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအကျူးနဲ့ post-pubertal တိရိစ္ဆာန်များအကြားမတူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ pre-pubertal ဦးနှောက်မတူဘဲ, Post-pubertal ဦးနှောက်အဘို့အရစေတယ်ဖြစ်ပါတယ် steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း မျိုးဆက်ပွားအပြုအမူသက်ဝင်စေဖို့ (Sisk နှင့် Zehr, 2005).
အထီးနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏ neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာသို့ကျယ်ပြန့်သုတေသနရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ, အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ကြောင့်ဟော်မုန်းတီးရွိုက်နှင့်အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းကြောင်းအာရုံကြောဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤပြောင်းလဲနေတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်အထီးလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်များနှင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလမ်းကိုပြောင်းလဲဘယ်လို pubertal ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ပါတယ် (Romeo et al ။ , 2002) ။ ထို့အပွငျ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်သုတေသနအများဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များထံမှကွဲပြား, မျောက်ဝံများအတွက် gonadal ဟော်မုန်းအဓိကအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ် အကွောငျးရငျး, မည့်အစား စွမ်းအား (copulate မှဝေါ်လဲန်, 2001) ။ gonadal ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုနှိုးဆွဖို့တိကျတဲ့ကြောင့်, သုတေသန၏ဤလိုင်း (လူမှုရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အခြေအနေတွင်ဆိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဝေဖန်သြဇာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဝေါ်လဲန်, 2001) ။ Nonhuman မျောက်သုတေသနအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူဆက်စပ်သင်ယူမှုအစိတ်အပိုင်း၏အရေးပါမှုကိုလည်းသရုပ်ဖော်ထားပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ။ ခံယူပေမယ့် endocrine အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် testosterone ဟော်မုန်းရလဒ်များကိုအတွက်ဆက်စပ်တိုး, တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းအောင်မြင်သောနားချင်းဆက်မှီ-သုက်၏အတွေ့အကြုံ (မြင့်မားသော testosterone ဟော်မုန်း၏အနာဂတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွတ်လပ်သောရဲ့အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းအမျိုးသမီး-ဖြစ်ပါတယ်ဝေါ်လဲန်, 2001) ။ endocrine အပျိုဖော်ဝင်ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်သူကိုတောင်မှယောက်ျားအောင်မြင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအောက်ပါမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးမြှင့်။ စုပေါင်း, တိရစ္ဆာန်သုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာဟော်မုန်းအကူးအပြောင်းနှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူနှင့်မည်ကဲ့သို့ဟော်မုန်းနှင့် ပတ်သက်. လူသားများတွင်သုတေသနအသစ်မေးခွန်းများကိုအကြံပြု, neurodevelopmental, သင်ယူခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် Contextual အပြောင်းအလဲများကို၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း။
လူသားမြားသညျတှငျ, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တိုးမြှင့်တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားနှင့်အပြုအမူများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိသို့မဟုတ်မလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ (higher testosterone ဟော်မုန်းကြိုးနှံစှာ pubertal ယောက်ျားလေးများအတွက်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလိုအလျောက် nocturnal သုက်၏စတင်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်ပါဝင်သည်ကြောင်းမော်ဒယ်များအတွက်ပျောက်ကွယ်သွားကမ့်ဘဲလ် et al ။ , 2005) ။ Pre-pubertal ယောက်ျားလေးများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်ထိအခြားသူတွေနဲ့ nocturnal ထုတ်လွှတ်မှု (အပါအဝင်တိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်Finkelstein et al ။ , 1998) ။ pubertal ဇာတ်စင်နှင့်အသက်လွတ်လပ်သော Cross-Section လေ့လာမှုများ, ခုနှစ်, testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ (လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်Halpern et al ။ , 1997, 1998) ။ ဆနျ့ကငျြအတွက် longitudinal လေ့လာမှုများ, testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲ (မိန်းကလေးများအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်ယောက်ျားလေးများများအတွက်လိင်ကိစ္စပွဲဦးထွက် (ပထမလိင်ဆက်ဆံခြင်း) နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်Halpern et al ။ , 1997) ။ ယောက်ျားလေးများသည်, pubertal ဇာတ်စင်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် (testosterone ဟော်မုန်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Halpern et al ။ , 1993) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုယ်ထင်ရှားအပြောင်းအလဲများကိုများ၏လူမှုရေးအရ-mediated သက်ရောက်မှုအနေဖြင့် gonadal ဟော်မုန်းများ၏ဇီဝ-mediated သက်ရောက်မှု disentangling များ၏အခက်အခဲကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အနည်းငယ်ယောက်ျားလေးများထိုကာလအတွင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမဲ့ယောက်ျားလေးများအဘို့, gametes ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မျိုးပွားဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်, အတော်လေးစောစော pubertal အကူးအပြောင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အပျိုဖော်ဝင်၏သင်တန်းကျော်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ယောက်ျားလေးများကြီး၏နှင့်ပိုပြီးကြွက်သားဖြစ်လာ, တိုးမြှင့သူတို့ရဲ့အသံတွေကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းနှင့်သူတို့၏မျက်နှာဆံပင် thickens ။ အလွယ်တကူသိသာဖြစ်ကြပြီးအလားအလာလိင်မိတ်ဖက်များကဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်နှစ်လိုဖွယ်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရနိုငျသောဤအလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ, မျိုးဆက်ပွားစွမ်းရည်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် neurodevelopmental အပြောင်းအလဲများကိုထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြုံနေရ၏ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုပြီးသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် se နှုန်း (Halpern et al ။ , 1993) ။ ထို့ကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တိုးမြှင့်လူမှုရေးအရ-လှုံ့ဆော်မှု, ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်း, သူတို့ကအလိုအလျှောက်တိုးလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုကြပါဘူး။
နောက်ထပ်ပုံရှုပ်ထွေးလူကြီးများအတွက် Testosterone နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးအထုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်အတူလေ့လာမှုများတစ်ဦးကျူးလွန်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကပိုမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ ကျဆင်းမှု (testosterone ဟော်မုန်းအတွက်Burnham et al, 2003 ။ မီးခိုးရောင်နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, 2009) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအနက် endogenous testosterone ဟော်မုန်းမ မဟုတ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအရေးပါသောဆက်စပ်မှုကိုပြသRoney နှင့် Simmons, 2013), ဒါပေမယ့် exogenous အမျိုးသမီးတွေအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-image ကို (တိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ထားပြီbuster et al, 2005 ။ Davis က et al, 2006 ။ Shifren et al ။ , 2006) ။ နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဒေတာ Testosterone နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစင်ပေါ်မှာအဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွင်အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
testosterone ဟော်မုန်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာက testosterone ဟော်မုန်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေသည့်အနိမ့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ testosterone ဟော်မုန်းဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူအာရုံကြောဒေသများရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်လူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်များစွာရှိသည်။ testosterone ဟော်မုန်း၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ အပျိုဖော်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများလေ့လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုသိမ်မွေ့စွာရှာဖွေခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသောလူမှုရေးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုရှင်းလင်းစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် gonadal hormones ပြောင်းလဲခြင်းမှလိင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများပြောင်းလဲမှုများကိုခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သော longitudinal လေ့လာမှုများသည်တိကျသောဟော်မုန်းဆိုင်ရာယန္တရားများ (Harden, Kretsch, Moore, Mendle, 2014).
3.2 ။ Estradiol
testosterone ဟော်မုန်းအပြင်, estradiol အတွက်တိုးပွါးခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းသော အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့အာရုံကြော circuitry ၏ပြုပြင်နှင့် activation မှကူညီသည်။ estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းနှစ်ဦးစလုံး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားရန်တွေ့ပါပြီ (Romeo 2003; Tackett et al, 2015 ။ Vermeersch et al ။ , 2009) ။ သည်အခြားဟော်မုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, မိန်းကလေးများအကြား, estradiol ရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှု, အပျိုဖော်ဝင်တဲ့စောစောစီးစီးလက္ခဏာသက်သေ (ရှိပါတယ်Drife, 1986) ။ ရင့်ကျက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေနေမတိုင်မီ gametes ထုတ်လုပ်စတင်သူကိုယောက်ျားလေးများ (နှင့်အခြားမျောက်ဝံများ) မှမတူဘဲ, လူ့မိန်းကလေးငယ်များကောင်းစွာအပြည့်အဝမျိုးဆက်ပွားစွမ်းရည်ရရှိမတိုင်မီအလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုး။ ဤသည်ကိုသူတို့မျိုးပွားမှုရင့်ကျက်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် neurodevelopmental အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံမီလူမှုရေးအရလိင်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိခံရ pubertal မိန်းကလေးတွေအတွက်ရလဒ်များ။ ဒီမတူကွဲပြားများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကန့်သတ်သုတေသန pubertal အတွက်အမျိုးသမီးဟော်မုန်းများအကြားဆက်ဆံရေးစူးစမ်းထားသည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ။ pubertal မိန်းကလေးများအနက်တိုးလာ estradiol အဆင့်ဆင့်တိုးချဲ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ အဖြူကိစ္စ pubertal တိုးတက်မှုနှင့်လျော့နည်းသွား မီးခိုးရောင်ကိစ္စ တံစဉ်များကို (Herting et al ။ , 2014) ။ သုတေသနဆက်စပ်လျက်ရှိသည်လီမိတက်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အီစရိုဂျင် အန္တရာယ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်တာနဲ့အတူ (Vermeersch et al ။ , 2008) ။ လူသားတွေအတွက် neurodevelopmental လေ့လာမှုအများစုအများဆုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းဟော်မုန်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ estradiol ထက် testosterone ဟော်မုန်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ striatal အမျိုးသမီးအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု (ကအေဲနျဂြီက de Mack et al, 2011 ။ Peper နှင့် Dahl, 2013; ပီတာ et al ။ , 2015) ။ (မျောက်လေ့လာမှုများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမဟုတ်ဘဲ testosterone ဟော်မုန်းထက်, ထိုအီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအကြံပြုဆက်စပ်နေကြပြီး, ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွင်အပေါ်မှီခိုကြောင်းဝေါ်လဲန်, 2001) ။ လူသားမြားသ၌ဤမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှုလည်း estradiol လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အဓိကချို့ယွင်းအတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြု (ကျဆင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဝေါ်လဲန်, 2001) ။ ထို့အပြင်, (တိုးလာနမ်းအတွက်တိုးမြှင့်အီစထိုဂျင်ရလဒ်များကိုမှ Pre-pubertal မိန်းကလေးငယ်များဖော်ထုတ်နှင့်အပြုအမူ neckingFinkelstein et al ။ , 1998) ။ မိန်းကလေးအများစုသည်ဦးနှောက်ကိုနားလည်, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မရှေးခယျြပေမယ့်, ဒီအထိခိုက်မခံပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဟော်မုန်း, အပြုအမူအကူးအပြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်ရလဒ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
4 ။ လူမှုအခြေအနေတွင်
pubertal ဟော်မုန်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာလေဟာနယ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်မထားဘူး။ လူငယ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအခါများတွင်တစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက်များအတော်များများ pubertal အချိန်ကိုက်ဖြစ်သော်လည်း, လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များနှင့်အတူ aligned နေကြသည်ကိုလည်း (လူငယ်၏လိင်ဆင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍCollins, 2003) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလေ့လာမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက် testosterone ဟော်မုန်း နှင့်ကြုံနေရပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံကစာရင်းအင်းဘာသာရေးန်ဆောင်မှုမှာလျော့နည်းမကြာခဏတက်ရောက်သူကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်-အပြုအမူ-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းနှင့်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အရေးပါမှု၏အလားအလာအာဏာအချက်များကြုံနေရ neurohormonal အပြောင်းအလဲများကို (Halpern et al ။ , 1997) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဘာသာရေးန်ဆောင်မှုမှာတက်ရောက်သူပြောင်းပြန်အာရုံရှာနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများသည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (Gaither နှင့် Sellbom, 2010), testosterone ဟော်မုန်းအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူအခြားအမှုအမျိုးမျိုး၌ဆက်နွယ်နေခဲ့ကြရသောနှင့် အီစရိုဂျင် အဆင့်ဆင့် (ကမ့်ဘဲလ်, 2010; Roberti, 2004) (ဒီ link အားလုံးလေ့လာမှုများဥပမာဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းမဖြစ်ပေမယ့် Rosenblitt et al ။ , 2001) ။ ထို့ကြောင့်, testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုအမှန်တကယ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံပြောင်းလဲမှုများမောင်းနှင်, နှိုင်းယှဉ်လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲမှုများမောင်းနှင်နေကြသည်သောအတိုင်းအတာ, စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ်။ , ဟော်မုန်း၏ကွဲပြားခြားနားသော strands Disentangling စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုအလွန်အမင်းအတိုင်းအတာများစိန်ခေါ်နေသည်: ဤနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းကအမှတ်အလေးပေး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာနောက်ထပ်သုတေသနသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေအများဆုံးထိရောက်စွာ neurohormonal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမူအကျင့် sequelae လိုအပ်ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အလတ်စားနိုင်သည့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အဆိုပါအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အရေအတွက်ဖြစ်ပေါ်ပေးထား အာရုံကြောစနစ်များ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းလူမှုရေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုလူမှုရေးဖြစ်စဉ်များဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အချက်များဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ, ဦးနှောက် function ကိုနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုသင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်လူမှုရေးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုလူမှုရေးနှင့်ဆက်စပ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ။
4.1 ။ မိဘများ
မိဘများရင်ခုန်စရာအကြောင်းကိုထောက်ခံမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ မိဘကလေးဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနှစ်ခုစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အထူးသနှင့် activation, amygdala, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရာ (Ernst et al ။ , 2005), စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (Whalen et al ။ , 2013), နှင့်ကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန် (LeDoux, 2003) ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မိခင်ဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးကိုလည်းဦးနှောက်ရငျ့၏လမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အထူးသမိခင်နှင့်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားပိုပြီးအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာ amygdala ၏လျော့နည်းသွားထုထည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ (Whittle et al ။ , 2014) ။ ဤရလဒ်သည်မိခင်ဆက်ဆံရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြု ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အပြုအမူစည်းမျဉ်းနှင့်ဆက်စပ်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။
မိဘအထံတော်ကဦးနှောက်ကို Activation အပေါ်ရှိကြောင်းအဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်၎င်းတို့၏မိခင်များ '' မျက်နှာများမှမြင့်မားသော amygdala reactivity ကိုအများရှိသော်လည်း, သူစိမ်းများ၏မျက်နှာများမှ amygdala reactivity ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပယ်ချ။ ဤရလဒ်သည်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိခင်တုံ့ပြန်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေဆဲ, တကျွန်းဆီသို့ဦးတည်စိုးရိမ်ပူပန် (အသေးစိတ်လူမှုရေးတူးဖော်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးငြင်းပယ်နေချိန်မှာကြောင်းအကြံပြုစပါး et al ။ , 2012) ။ သုတေသနမိခင်ရှိနေခြင်းအိပ်ရေးဝြခင်းကိုနိုငျကွောငျးလည်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည် cortisol စိတ်ဖိစီးမှုကလေးတွေအတွက်တုန့်ပြန်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့တူညီကြားခံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ပါဘူး (Hostinar et al ။ , 2014) ။ ဤသည်မိခင်များငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအိပ်ရေးဝြခင်းဖို့အစေခံကြောင်းအကြံပြုနှင့်ကလေးများဝတ္ထုလူများနှင့်အခြေအနေများနှင့်တိုးပွားလာတူးဖော်ရေးအကြောင်းကိုကျဆင်းနေကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်လိုက်ပါသွားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံမှန်လမ်းကြောင်း, မိဘရှိနေခြင်းဆိုင်း၏ဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလိုက်နာအဖြစ်။
မိဘကလေးဆက်ဆံရေးအပေါ် neuroscience သုတေသန Complementing, အမူအကျင့်သုတေသနအပြုသဘောမိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် (ပထမလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာလိင်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလျော့နည်းသွားvan de Bongardt et al ။ , 2014), နှင့်ဂရုစိုက်ဖြစ်၎င်းတို့၏မိဘများရိပ်မိသူကိုမြီးကောင်ပေါက် (ပထမလိင်နှောင့်နှေးကြပါပြီLongmore et al ။ , 2009) ။ ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်ဆံရေးကိုပွင့်လင်းဆက်သွယ်ရေးရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူလူငယ်မှာလည်းလျော့နည်းရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ, တိုးမြှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု (Parkes et al ။ , 2011), နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (စျေးနှုန်းနှင့် Hyde, 2008), နည်းပါးလာမရည်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန် (Miller က et al ။ , 2001) နှင့်နည်းပါးလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (ကံ et al, 2010 ။ Kerpelman et al ။ , 2016).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့အကူးအပြောင်းများသောအားဖြင့်ပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လျော့နည်းမိဘစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ဒီမှ neuroscience နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနမိဘများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကျောမိဘအုပ်ထိန်းခြင်းမှဆွဲထုတ်, ဒါပေမယ့်အစားပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပံ့ပိုးရန်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုထောက်ခံမှုပေးအနေဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့မဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့နောက်အဆင့်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်ငြမ်း။ ကံမကောင်းစွာပဲအနည်းငယ်အရင်းအမြစ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်စောင့်ရှောက်သို့မိဘများကိုထောကျပံ့ဖို့တည်ရှိခြင်းနှင့်ပင်နည်းပါးလာအရင်းအမြစ်များကိုငယ်ရွယ်လူကြီးသို့အကူးအပြောင်းအဘို့ထိုသူတို့ပြင်ဆင်လော့။
4.2 ။ ရွယ်တူချင်း
ရွယ်တူချင်းလည်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. မြီးကောင်ပေါက် '' ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့သရုပ်ပြခဲ့ကြChoukas-Bradley et al, 2014 ။ Hampton et al, 2005 ။ Suleiman နှင့် Deardorff, 2015) ။ တချို့ကသုတေသနအထူးသ, ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်, ဒါမှမဟုတ်ရွယ်တူပင်အကြံပြုရှိနေခြင်း, ဆယ်ကျော်သက် '' အာရုံကြောဆုလာဘ် circuitry ၏ activation တိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ် ventral striatum (VS), နှင့်ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများ (အဘို့ဖွစျပျေါပါဘူးတဲ့လမ်းအတွက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူချိန် et al, 2011 ။ Telzer et al ။ , 2014) ။ ဒီတစျခုအနက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌အန္တရာယ်များကိုယူထူးခြားအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုနိုင်ကြောင်း, သို့သော်, အပြုအမူယူပြီး activation နှင့်အန္တရာယ် VS တိုးမြှင့်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ဝေးဖြောင့်နေ့မှ စ. ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုများ (တိုးချဲ့အန္တရာယ်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်များကိုအပေါ်တာနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ activation VS တိုးလာတွေ့ပြီချိန် et al ။ , 2011), နဲ့အခြားလေ့လာမှုများဒီရလဒ်ပုံတူကူးယူကြပြီမဟုတ်စဉ် (Peak et al ။ , 2013) ။ အဲဒီအစားဒီလေ့လာမှုတွေထဲမှာ activation တွေ့ပြီ ယာယီ parietal လမ်းဆုံ, Self-အခြားသတ္တုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်၏ဧရိယာ, အထူးသလူမှုရေးဖယ်ကြုံနေရပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက် '' တိုးချဲ့အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခုခံတွန်းလှန်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် (Peak et al ။ , 2013) ။ နောက်ထပ်အမှုအရာရှုပ်ထွေးစေရန်အခြားလေ့လာမှုများစိတ်ခံစားမှုမျက်နှာများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း activation VS တိုးတက်အထူးပျော်ရွှင်ဝမ်းနည်းအသုံးအနှုန်းတွေနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြပြီတွေ့ပြီ တိုးမြှင့် သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ Self-အစီရင်ခံခုခံ (Pfeifer et al ။ , 2011) ။ စုပေါင်း, ဒီသုတေသနသက်တူရွယ်တူရှိနေခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်အာရုံကြော activation အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်ကွဲပြားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ လူမှုရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်အဆိုပါအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှဖွင့်လှစ်ဖြစ်နှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်စပ်ဝတ္ထုလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများခံစားရန်လူငယ်များ priming နေကြသည်။ ပလေတိုနဲ့ရင်ခုန်စရာနှစ်ဦးစလုံးရွယ်တူ (ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးအလီနှင့် Dwyer, 2011; Baumgartner et al, 2011 ။ Crockett et al, 2006 ။ Kennett et al, 2012 ။ Potard et al ။ , 2008) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်သက်တူရွယ်တူ-mediated ဖြစ်၏ လိင်ကတက်ကြွစွာပလေတိုရွယ်တူရှိခြင်းအစောပိုင်းကပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံ ပို. မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်အလီနှင့် Dwyer, 2011; Furman et al, 2007 ။ Santor et al ။ , 2000).
4.3 ။ မီဒီယာ
လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအပြင် "စစ်မှန်သောအသက်တာ၌," အစဉ်အလာမီဒီယာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံဖော်လိမ့်မည်။ လိင်နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျမီဒီယာတစ်လျှောက်လုံးမြဲဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်၏ 70 ကျော်% (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအချို့ကိုအမျိုးအစားပါရှိသည်Kunkel et al ။ , 2005) ။ ဆက်စပ်နှင့်လူဦးရေအပေါ် မူတည်. 23-95 နှစ်အရွယ်အစီရင်ခံစာ 10 နှင့် 19% အစဉ်အဆက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတော်မူပြီးမှအကြားနှင့် 28 နှင့် 84 အကြား% ကို (ထိတွေ့မှုမလိုအပ်သောသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်တဲ့ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံပေတရုနှင့် Valkenburg, 2016; Wolak et al ။ , 2007) ။ mass မီဒီယာ (အထူးသဖြင့်အစောပိုင်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်အပျိုဖော်ဝင်တွေ့ကြုံခံစားသူကိုမိန်းကလေးများအဘို့, သိသိသာသာလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်းဟာ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါသက်တူရွယ်တူ" အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဘရောင်း et al ။ , 2005).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဤအရေးပါသောထိတွေ့နေသော်လည်းနည်းနည်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, မီဒီယာအကြောင်းအရာအာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာ impact တွေ့ရှိထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက်အကြားအကြမ်းဖက်မီဒီယာကန့်သတ်ထိတွေ့မှုတိုကျရိုကျ inhibitory စနစ်များနှင့် subcortical ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲထိခိုက်စေတွေ့ရှိထားသည် limbic အဆောက်အဦအဖြစ်သူတို့ကိုအကြားဆက်သွယ်မှုများနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူအပေါ်အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ (Hummer 2015; Kalnin et al ။ , 2011) ။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအပေါ်အထူးကောက်ယူထားပြီးမဆိုပုံရိပ်သုတေသနသတိထားမဟုတ်ပေမယ့်, ကယေဘုယျမီဒီယာကနေညစ်ညမ်းဖို့အရာရာအတွက်အပေါများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်တွေကြောင့်အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်, လည်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, neurodevelopment အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုပုံဖော်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သဘောထားတွေကိုရှာကြံမြင့်မားတဲ့အာရုံခံစားမှုနှင့်အတူပိုမိုအဆင့်မြင့် pubertal လုလင်တို့သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထွက်ရှာအများဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိုးမြှင့ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနည်းတင်းကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ (အကြားခိုင်မာသောအသင်းအဖွဲ့လည်းမရှိပေတရုနှင့် Valkenburg, 2016).
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်မဟာဗျူဟာပေးထားပါတယ်။ ဆန်းသစ်ဆက်သွယ်ရေး neuroscience သုတေသန၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် (ဥပမာ Falk et al ။ , 2015, 2012) အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်အတူ coupled ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကြည့်ရှုမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူဆက်စပ်အာရုံကြော activation နားလည်ကူညီခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဤမီဒီယာအခင်းအကျင်းကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများအမျိုးအစားများကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေး neuroscience တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမူဘောင်လျှောက်ထားခြင်းအပြုသဘောရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြောင်းကြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုတိုးမြှင့်ကူညီပေးနိုင် အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာ ပိုပြီးအန္တရာယ်မက်ဆေ့ခ်ျများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့် virtual reality ညစ်ညမ်း၏လျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာ၏ကျယ်ပြန့တိုးမြှင် access ကိုအသက်အတွက်ဤအသိအမြင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအရေးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလကြောင်းပေးထားကျနော်တို့ neurodevelopment, ထိုရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုလိုအပ်ပါတယ်။
5 ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience များအတွက်ကတိပေး Translational အခွင့်အလမ်းများ
အထက်မီးမောင်းထိုးပြသကဲ့သို့, ဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စံတန်ဖိုးလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အဘို့များစွာသောအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ အဆိုပါစံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးချဲ့တဘက်, နောက်ခံအာရုံကြောဘယ်နေရာတွေမှာလဲနားလည်သဘောပေါက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးရလဒ်များတိုးတက်စေရန်ရည်မှန်းမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်အကြောင်းကြားနိုင်သည့်အတွက်တိကျသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကမ္ဘာအနှံ့ elongate ဆက်လက်, ဤ elongated on ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည် အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်သိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင်အပျိုဖော်ဝင်, ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလမ်းဆုံကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးချဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ဤဘယ်နေရာတွေမှာလဲ support နှင့်တိုးတက်စေရန်ရည်မှန်းမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခွင့်အလမ်းဥပမာသုံးခုကိုအောက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။
5.1 ။ ဥပမာအား 1: တိုးချဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်
လူတို့တွင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ထိုဟော်မုန်းနှင့်အတူစတင်တစ်ဦးလူမှုရေးအရဆောက်လုပ်ထားကာလဖြစ်ပြီး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အဆုံးအများကြီးလျော့နည်းရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသငျ့ရရှိနှင့် (မျိုးပွားဖို့လူမှုရေးခွင့်ပြုချက်ရှိခြင်းအကြားကာလ spanning "အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျိုးဆက်ပွားဘဝအဘို့ပြင်ဆင်၏ကာလ" အဖြစ်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်လူမှုရေးအရဆောက်လုပ်ထားကြသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ features တွေကိုအများတို့သည်လည်း, ဒါပေမယ့်Schlegel 1995, p ။ 16) ။ မျောက်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး, ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်မိတ်လိုက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမယ့်ခဲ (အမျိုးအနွယ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်Schlegel, 1995) ။ လူသားမြားသညျတှငျ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နဲ့ဆက်စပ်အရှည်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်; သို့ရာတွင်အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကာလ, ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝခင်းကျင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတာဝန်ဝတ္တရား၏အခမဲ့, (ယဉ်ကျေးမှုတစ်လောကလုံးဖြစ်ပါသည်Schlegel, 1995).
ယနေ့လူငယ်သူတို့မျိုးပွါးခြင်းနှင့်ရသောအခါမျိုးပွားလူမှုရေးအရနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်၏ဇီဝကမ္မနိုင်စွမ်းအခါအကြားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံပေါင်းခုနှစ်, အပျိုဖော်ဝင်များ၏အသက်အရွယ် (ဆက်လက်ကျဆင်းနေထားပါတယ်မိဘ et al, 2003 ။ Sørensen et al ။ , 2012) ။ မိန်းကလေးများအဘို့, ဒီမီးယပ်စချိန်အသက်အရွယ်အတွက်ကျဆင်းမှုများကအဓိကအားဖြင့်တိုင်းတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မီးယပ်စချိန်မဟုတ်ဘဲနောက်ကျ pubertal အဆငျ့ဆငျ့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်, ဒီမက်ထရစ် pubertal စတင်ခြင်းမှာပျမ်းမျှအားဖြင့်အသက်အရွယ်အတွင်းရှိသမိုင်းဝင်ကျဆင်းမှု၏အတိုင်းအတာလျှော့မတွက်စေနိုင်သည်။ မိန်းကလေးများအကြားအပျိုဖော်ဝင်များ၏အသုံးအများဆုံးအစောပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာ၏ပျမ်းမျှအသက်, ရင်သားကင်ဆာရွက်ပေါက်, မီးယပ်စချိန်မှာပိုပြီးလျှင်မြန်စွာအသက်အရွယ်ထက်ငြင်းဆန်ထားပါတယ်များနှင့်ရလဒ်အဖြစ်, မိန်းကလေးများ pubertal အကူးအပြောင်း (ထဲတွင်အချိန်ကြာကြာပမာဏဖြုန်းနေကြတယ်Mendle, 2014) ။ စိတ်ဝင်စားစရာရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အတွင်းရှိကျဆင်းခြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွက်အစောပိုင်းတိုးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ လိင်ဟော်မုန်း အပါအဝင်အပျိုဖော်ဝင်နှင့်ဆက်စပ် gonadotropin နှင့် အီစရိုဂျင် (Sørensen et al ။ , 2012) ။ ဆနျ့ကငျြ, ယောက်ျားလေးများ-အဓိကအား testicular growth- ဘို့အပျိုဖော်ဝင်၏အစောပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်ငြင်းပယ် (အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဟော်မုန်းအတွက်လောကဆိုင်းနေဖြင့် paralleled ပြီSørensen et al ။ , 2012) ။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာကွာခြားချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်လေ့လာခြင်းအတွင်းနှင့်အကြားနှစ်ဦးစလုံး pubertal အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကဤကွဲပြားခြားနားသောခေတ်ရေစီးကြောင်း၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြမထားပါ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းများအတွက်လူသားများမျိုးပွား၏ဇီဝနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အခါအသက်အရွယ်အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျဆင်းနေလမ်းကြောင်းသစ်ရှိပါတယ်။ တချို့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာလဲနီးကပ်စွာ pubertal ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများမှချည်ထားသောဖြစ်ကြောင်းပေးထားသောကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်စနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအစောပိုင်းက Trend မှစတင်ကြပြီ (တစ်ထူးချွန်ပင်ကိုယ်မူလဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေမယ့်) ဖွယ်ရှိသည်။
မျိုးဆက်ပွားစွမ်းရည်များ၏အသက်အရွယ်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လူငယ်များသားဘွားသည်လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်သောအရာမှာအသက်အရွယ်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအရင်းအမြစ်နိုင်ငံများတွင်မှာအမျိုးသမီးငယ်ပထမဦးဆုံးဝက်ဝံကလေးများအသက်အတိတ် 40 နှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးမြှင့်ထားပြီး, ဤလမ်းကြောင်းသစ်ယခု (အဖြစ်ကောင်းစွာအောက်ပိုင်းအများအပြားနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လုံလောက်သောအရင်းအမြစ်နိုင်ငံများတွင်စတင်စေ့စေ့စပ်စပ် et al, 2007 ။ Bongaarts နှင့် Blanc, 2015; Mathews နှင့် Hamilton က, 2009; Sedgh et al, 2015 ။ Westoff 2003) ။ ယနေ့, ဆာဟာရအာဖရိကမှာအဟောင်း 20.9 နှစ်ပေါင်းထံမှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားနှုန်းများမှာအမြိုးသမီးမြား၏ယုတ်အသက်, ကမ္ဘာအနှံ့အမေရိကန် (အို 25 နှစ်Bongaarts နှင့် Blanc, 2015; Mathews နှင့် Hamilton က, 2009).
မကြာသေးမီကတိုင်အောင်, မျိုးပွါး၏လူမှုရေးလက်ခံမှုမြင့်မားလက်ထပ်ထိမ်းမြားဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးကလေးကမကြာခဏလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုလည်းမကြာသေးမီနှစ်များတွင်နှောင့်အယှက်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ ပို. ပင်သိသိသာသာပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွား၏အသက်အရွယ်ထက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား-အလွန်အမင်းလူမှုစီးပွားရေးနှင့်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း၏အသက် (ကမ္ဘာအနှံ့နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့တိုးမြှင့် variable တွေကို-ဖြစ်ပါတယ်Westoff, 2003) ။ ဒုတိယအချက်, အထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားအရင်းအမြစ်နိုင်ငံများရှိ, ပိုပြီးကလေးမွေးဖွားဥပဒေရေးရာထိမ်းမြားပြင်ပတွင်ဖြစ်ပေါ်အတူအိမ်မထောင်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်နည်းပါးလာလက်ထပ်ထိမ်းမြား uncoupling လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိခဲ့ နှင့် ကလေးမွေးဘို့လက်ထပ်ပြီးနောက်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းနေအိမ်ထောင်သည် (အင်္ဂလန် et al, 2013 ။ Hayford et al ။ , 2014) ။ အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဇီဝအကူးအပြောင်းကတဆင့်သွားပါဒါပေမဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်မိဘအုပ်ထိန်းထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဘယ်တော့မှနှင့်ရသေးတုန်းပဲရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြသူတွေကိုတစ်ဦးတိုးပွားလာလည်းရှိပါသည်။ အတူတူကဤခေတ်ရေစီးကြောင်းရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စံတန်ဖိုးဘယ်နေရာတွေမှာလဲသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်း, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဇီဝအချက်များများ၏လမ်းဆုံအကြောင်းကိုပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရရှိမှု၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံဖော်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ Contextual အချက်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုသေး unexplored ပင်ကိုယ်မူလမေးခွန်းတွေကျယ်ပြန့်ဖို့ထောက်ပြသည်။
လူငယ်များကြိုတင်အရွယ်ရောက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များကိုအပြည့်အဝနယ်ပယ်ယူဆတိုးမြှင်ရငျ့, ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်တည်ငြိမ်ဘို့ရှည်လျားတဲ့ကာလရှိသည်ဖို့အဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းများပေး childbearing နောက်ပိုင်းတွင်လောကအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီယခုဇီဝကမ္မ, ဇီဝခံစားသူတို့၏ဘဝများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဖြုန်းနှင့် motivationally မျိုးပွါးများ၏အခြေအနေတွင်ပြင်ပရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရစေတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့ပိုကောင်းအပြုအမူရလဒ်များနှင့်အစောပိုင်းနှင့်အတူဆက်စပ်တွန်းအား၏အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုကျောထောက်နောက်ခံပြုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ် ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, အပြုသဘောဘယ်နေရာတွေမှာလဲလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းလူငယ်များအထောက်အကူနှင့်ငြမ်းများကိုနိုင်ရန်အတွက်။
5.2 ။ ဥပမာအား 2: ဓတေားဆန်းသစ်တီထွင်မှု
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်း၏သင်တန်းကျော်လူငယ်လူများ၏အများစုလိင်တက်ကြွဖြစ်လာသည်။ တကမ္ဘာလုံး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ပျမ်းမျှအသက် (အထီးအဘို့အဟောင်းများကိုနှစ်ပေါင်း 16.5 မှ 24.5 ကနေလာနေကြပါတယ်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် 15.5 ထံမှ 21.5 မှအသက်အနှစ်ကောင်းစွာ et al ။ , 2006) ။ သူတို့မိဘချင်မတိုင်မီအများအပြားလူငယ်များလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌များစွာသောလူငယ်များဓတေားကိုရွေးချယ်ပါ။ ကွန်ဒုံး, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာထုပ်, မြှေး, အချို့ပေမယ့် Intrauterine devices များ (IUDs) Non-ဟော်မုန်းဓတေားပူဇော်မြီးကောင်ပေါက်ကအသုံးပြုဓတေား၏အဓိကနည်းလမ်းများဟော်မုန်းများပါဝင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားရှည်လျား-သရုပ်ဆောင် Reversible လုပ် contraceptives (LARCs) ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့မကြာသေးမီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူဝါဒကတွန်းအားပေးဟော်မုန်းအခမဲ့ကဲ့သို့အချို့သောအလွန်ထိရောက်သော Non-ဟော်မုန်းနည်းလမ်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုရာထူးတိုးထားပါတယ် IUDsနှင့် IUDs, implants နှင့်် Injection ၏တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရာထူးတိုးထားပါတယ် progestin (Ott et al ။ , 2014) ။ pubertal ဟော်မုန်း neurodevelopment သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအထောက်အထားပေးထားပါကလျှင်သိရှိနိုင်ဖို့နှင့်ပုံမှန်ဟော်မုန်းဘယ်နေရာတွေမှာလဲကမောက်ကမဖြစ်စေရန်၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနှင့် critical ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်းအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အထူးသအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါသည်။ ယနေ့အထိကျနော်တို့ကဤသက်ရောက်မှုရှာဖွေစူးစမ်းမဆိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအချက်အလက်များ၏သတိထားမိကြသည်မဟုတ်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခင်းကျင်းခြင်းနှင့် LARCs ၏မြှင့်တင်ရေးနေသော်လည်း ပေါင်းစပ်ပါးစပ် contraceptives အီစရိုဂျင်နှင့် progestin နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်တဲ့ (COCs), (ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသွားမည်တားဆေးနည်းလမ်းများ၏တဦးတည်းဆက်လက်တည်ရှိOtt et al ။ , 2014) ။ မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုသောအခါ, ကိုယ်ဝန်တားဆီးဘို့အလွန်အမင်းထိရောက်သောနေသော COCs, သိသိသာသာအခမဲ့နှင့်စုစုပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးနှိမ်နင်းရန်တွေ့ပါပြီ testosterone ဟော်မုန်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအတွက်အထိ 50% အားဖြင့်အဆင့်ဆင့် (Zimmerman et al ။ , 2013) ။ testosterone ဟော်မုန်း၏ဤဖိနှိပ်မှု (အသက်၏သုခချမ်းသာနှင့်အရည်အသွေးလျော့, လျှော့ချလိင်စိတ်, သိမြင်မှုပြတ်တောက်အပါအဝင် COCs နှင့်ဆက်စပ်တိုင်ကြားချက်၏နောက်ခံအရင်းအမြစ်ဖြစ်ထင်နှင့်အရိုးထုထည်လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးZimmerman et al ။ , 2013) ။ COCs အပေါ်အမျိုးသမီးတွေခြုံငုံရှိပေမယ့် အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်း အဆင့်ဆင့်, အပိုဆောင်းသုတေသနကြောင်းအကြံပြုထားသည် ပွောငျးလဲ အမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်တာဝန်များကိုအတွက်စေ့စပ်ကြသောအခါ testosterone ဟော်မုန်းအတွက် (ဖနွမ်းပင်မြို့၌အသုံးပြုမှုနေသော်လည်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲEdwards ကနှင့် O'Neal, 2009) ။ နောက်တကြိမ်, ဒီအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူဆက်စပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ testosterone ဟော်မုန်းတိုး (အလယ်၌နေသောအမျိုးသမီးငယ်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကိုမည်သို့ဖနွမ်းပင်မြို့၌အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပင်ကိုယ်မူလမေးခွန်းများကိုအကြံပြုBraams et al ။ , 2015).
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေထုတျပွနျသောဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအပြင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းလျှော့ချရေး၏နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းအတွေ့အကြုံများနှိုးဆွသောတိုးအကျိုးစီးပွားလှုံ့ဆျောပြသထားပြီးကြောင်းပေးထားသည် peripubertal သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကာလအတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဟန့်တားအပြုသဘောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာကိုထောက်ပံ့သော prosocial အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေးအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့စေနိုင်သည်။ ခြုံငုံ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် COCs ယူပြီးအမျိုးသမီးငယ်အတွက်နှိမ်နင်းခံရနိုငျပေမယ့်အဘို့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်း, ဟန့်တား testosterone ဟော်မုန်းအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောစွန့်စားမှုဆည်းပူးနေကန့်သတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအညီအမျှဖြစ်နိုင် တုံ့ပြန်မှု လှုံ့ဆော်မှုဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်းပိုကောင်းသည်ဤအလားအလာဘယ်နေရာတွေမှာ၏တစ်ခုခုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ၎င်းယန္တရားများကိုနားလည်ကူညီရန်မရှိမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျ testosterone ဟော်မုန်း၏နာတာရှည်ဖိနှိပ်မှု၏ဂယက်ရိုက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်, အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟော်မုန်း orchestration နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လည်းဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်အသစ်သောတားဆေးနည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအားကောင်းရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါကတိရိစ္ဆာန် neurodevelopmental မော်ဒယ်များနောက်ပိုင်းတွင်လူသားများတွင်စမ်းသပ်ပြီးနိုင်အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓတေားရှာကြံအမျိုးသမီးငယ်အသစ်အတားအဆီးမိတ်ဆက်ပေးဖို့မကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြချင်ပေမယ့်အစားအကြားအပြန်အလှန်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုပြီးရှိခြင်းကြောင့်အဆိုပြုကြပါ ဟော်မုန်း contraceptives နှင့် neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာလုံခြုံမှု, ထိရောက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးငယ်များအတွက် contraceptives ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ကူညီလိမ့်မယ်။
5.3 ။ ဥပမာအား 3: ကလေးမွေးခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်း
စောစောစီးစီးသားမွေးတယ်ဆိုတာ, အသက် 15 မီ, ကနျြးမာရေးအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောတူညီမှုမိခင်နှင့်မွေးကင်းစနှစ်ဦးစလုံး၏, လူမှုစီးပွားရေးပညာရေးနှင့်လူမှုရေးရလဒ်များ (လည်းမရှိအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာကလေးမွေးဆီသို့ဦးတည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုအပြုသဘောလမ်းကြောင်းခဲ့Brooks-Gunn & Furstenberg, 1986; Gibb et al, 2014 ။ Hofferth နှင့် Reid, 2001; Brooks-Gunn နှင့် Furstenberg, 1986) ။ ရလဒ်များအပေါ်ဤအသိပညာနေသော်လည်းကျွန်တော်အစောပိုင်းကလေးမွေးများ၏အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုသက်ရောက်မှုသို့အနည်းငယ်သာထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။ 100 နှစ်ကျော်, ကြှနျုပျတို့ကိုယ်ဝန်ကလေးမွေး, နို့နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းဟော်မုန်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၏တိကျသော sequence ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကိုနားလည်ကြပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်အတွက်သိသိသာသာတိုးကပါဝင်ပတ်သက် human chorionic gonadotropin (hCG), အီစရိုဂျင်နှင့် ချို့ယွင်းသော။ အလုပ်သမားအတွက်တိုးနှင့်အတူ coupled အီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏ placental ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဆက်လက်တိုးအောက်ပါအတိုင်း oxytocin, နဲ့အတူ Endorphinsနှင့် prolactin။ ဆနျ့ကငျြ, နို့တစ်ဦးလျှင်မြန်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော Drop-ချွတ်ကပါဝင်ပတ်သက် gonadal ဟော်မုန်း နှင့် (prolactin တိုးပွါးစယ် et al ။ , 2001) ။ ကြွက်မော်ဒယ်များများ၏ဆန္ဒအလျောက်, တက်ကြွသော, အစာစားချင်စိတ်ရှုထောင့်ကြောင်းသရုပျဖျော မိခင်အပြုအမူထွက်ရှာကြံနှင့်ခွေးများကိုပြန်လည်ရရှိရန်အပါအဝင်အလွန်အမင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် activation လှုံ့ဆော်ကိုယ်ဝန်ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် mesolimbic dopamine စနစ်က (Numan နှင့် Stolzenberg, 2009) ။ ဒါက, အဓိကအားဖြင့်ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုပေမယ့်မီးမောင်းထိုးပြ dopamine တုန့်ပြန်မှုစနစ်များမိဘအုပ်ထိန်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဘို့လည်းအရေးကြီးလှသည်။ လူ့မော်ဒယ်များမှတိရိစ္ဆာန်ကနေပေါင်းကူးတစ်ခုကြိုးပမ်းမှုအတွက်, မောရှေ-Kolko နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကစမ်းသပ်ပြီး, ဒါပေမယ့်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သောမိခင် ventral ထိခိုက် striatal တစ်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်မြျှောတုံ့ပြန်မှု (တဖန်မောရှေအား-Kolko et al ။ , 2016) ။ ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်တစ်ခုမွေးကင်းစကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ထံမှအဖြစ်ထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားသည်အတိုင်း, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာအပေါ်ကိုယ်ဝန်၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ဂေဟဗေဒခိုင်လုံသော Paradigm ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အရေးပါမှုကိုမှထပ်တလဲလဲအမှတ်မရှိခြင်း။ အားလုံးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်သားမွေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်စပ်သည့်ဟော်မုန်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်အကွာအဝေးကိုဖော်ပြရန်ပေမယ့်အနည်းငယ်သည် pubertal အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းကဤဟော်မုန်းဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့နေရခြင်းသို့မဟုတ်နီးကပ်စွာကအောက်ပါပုံကိုအကြောင်းကိုလူသိများသည်, neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာသာသက်ရောက်သည်။
နှောင့်နှေးကလေးမွေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်းအစောပိုင်းကလေးမွေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်အဖြစ်အညီအမျှအမျှအရေးကြီးပါတယ်။ သောအတိုင်းအတာအဖြစ်သတ်မှတ်အာရုံကြောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး နှင့်လူမှုရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေလှုံ့ဆျောမှုစနစ်များကိုကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်စေ့စပ်နှင့် activated ကြသည်, (အသက်၏တတိယဆယ်စုနှစ်အတွင်းသို့ဆက်လက်တွေ့ရှိထားသည်Crone နှင့် Dahl, 2012) ။ အလွန်မကြာသေးမီကလူ့သမိုင်းမှာအထိ, ကတစ်ဦးချင်းစီ၏အများစုမိတ်လိုက်, Bond နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်ကြောင်းဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏကောင်းစွာအသက်တာ၏စတုတ္ထဆယ်စုနှစ်သို့မိဘအုပ်ထိန်းနှောင့်နှေးရန်မကြာသေးမီလမ်းကြောင်းသစ်, အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးလွှမ်းမိုးအတွက်ဇီဝဗေဒနှင့်အတွေ့အကြုံအကြားအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုအချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းများကိုတွေ့ရမယ်။ ထို့အပြင်မျိုးဆက်ပွားရင့်ကျက်၏စတင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးသားမွေးတယ်ဆိုတာအကြားတိုးပွားလာခွဲခြာသူတို့တိုးချဲ့သောအခါယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးတိုးချဲ့ကာလရှိသည်ဖို့ဖန်တီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်ရေး ပညာရေးနှင့်အခြားဘဝရည်မှန်းချက်တွေရန်။ ဒါဟာအစအစောပိုင်း pair တစုံ-Bond ဘို့လိုအပ်ကြောင်း minimize လုပ်အစားလူငယ်များကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အဘို့အခွင့်အလမ်းအထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါသည်။ သူတို့တစ်တွေတစ်ခုတည်းမိတ်ဖက်ဖို့ကျူးလွန်မီထိုသို့အမေရိကန်နှင့်ဥရောပအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားအရင်းအမြစ်နိုင်ငံများရှိလူငယ်လူများ၏လွှမ်းမိုးသောအများစု (ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးရှိGuttmacher Institute မှ, 2014) ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဆာဟာရအာဖရိကနှင့်တောင်အမေရိကအဖြစ်အပျိုဖော်ဝင်သားမွေးတယ်ဆိုတာအကြား span ရုံ elongate မှစတင်နေပြီဘယ်မှာနိုင်ငံတွေအတွက်, ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25-30% (နားဆက်မှီရာတွင်မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံGuttmacher Institute ကနှင့်နိုင်ငံတကာစီစဉ်ထားမိဘအဖွဲ့ချုပ်, 2010) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience တစ်ဦးကလူကျယ်ပြန့်နှင့်အနည်းငယ်နှင့်အတူကြာကြာပိုပြင်းထန်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်သောလူငယ်များနှင့်အတူမျိုးစုံပြောင်းလဲနေသောမြင့်မားပြင်းထန်မှုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းလူငယ်များနှင့်အတူဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားသော neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာလဲခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစပထမသုံးဘဝဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်နှောင့်နှေးသောသူတို့အားစဉ်အတွင်းမိဘအုပ်ထိန်းထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသူတွေကိုအကြားကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဘယ်နေရာတွေမှာလဲခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
အမြိုးသမီးမြားအပွငျ, ယောက်ျားလည်းမိတ်လိုက်နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ဆက်စပ်ဟော်မုန်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုခံစားရသည်။ အမေရိကန်မှာတော့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များနှင့်၎င်းတို့၏အဓိကမိတ်ဖက်ပြင်ပဆက်ဆံရေးရှာကြံကြသူတွဲယောက်ျားရှာကြံကြသူတစ်ခုတည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မား testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ရှိသည်နှင့်ထို့ပြင်, ဘိုးဘေးတို့သနေသောယောက်ျား, မခွဲခြားဘဲကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်း, အနိမ့်ဆုံးရှိ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် (မီးခိုးရောင်နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, 2009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ဒီကြားဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းသစ်အရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခနှင့်ဟော်မုန်းများနှင့်စကားစပ်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုး (တောင်းစား, အချို့နိုင်ငံများအတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုအတွက်ရရှိထားသူမီးခိုးရောင်နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, 2009) ။ ကလေးမွေးခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအကြောင်းကိုဒီသုတေသနအပေါ်တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘောင်ချပြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးမှအာရုံကြောရငျ့၏အရှိန်အဟုန်ကိုလုံးဝမယ့်တင်းကြပ်သောကဆုံးဖြတ်မပေးကြောင်းအကြံပြု ontogenetic အချိန်ဇယားမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းရဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်၏တောင်းဆိုချက်များအားဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုမျိုးဆက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိဘ forestalls အမျှလုံးဝအချို့ကိစ္စများတွင်ပါကပိုကောင်းယခုဘဝ၏တတိယဆယ်စုနှစ်အတွင်းသို့အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ "ပုံမှန်" ဘယ်နေရာတွေမှာအပေါ်ရှိပါတယ်အဘယျသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို behoove လိမ့်မယ်။
6 ။ ကောက်ချက်
ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သုတေသန, မူဝါဒနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုမကြာခဏသိပ္ပံအားဖြင့်ထက်လူမှုရေးတန်ဖိုးများနှင့်အပြောအဆိုအားဖြင့်ပိုပြီးမောင်းနှင်နေကြသည်။ အသက်တာ၏ဒုတိယဆယ်စုနှစ်နီးပါးအားလုံးလူငယ်များအပျိုဖော်ဝင်တွေ့ကြုံခံစားနှင့်များစွာသောစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမကြာခဏသုံးနေစဉ်ကာလအထိချဲ့ကြောင်းပေးထား ဟော်မုန်းဓတေားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်ကလေးမွေးဤအတွေ့အကြုံများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးသို့သုတေသနလုပ်ငန်း, လူမှုရေးအခြေအနေတွင်နှင့် အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ သိသိသာသာဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကျနော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်မယ်လို့, ဤဘယ်နေရာတွေမှာလဲတိုးတက်လာဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအကြောင်းကြားလိမ့်မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience အပါအဝင်ဘက်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံ, စောစောရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဘယ်နေရာတွေမှာကိုထောက်ပံ့သောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအတွေ့အကြုံများအမျိုးအစားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့လမ်းကြောင်းပေးထားပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience အစောပိုင်းရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကို prosocial, ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်အပြုအမူတွေထက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသောအခြေအနေများသိရှိနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience သုတေသနရင်ခုန်စရာနှိုင်းယှဉ်ပလေတိုရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအကြောင်းကြားကြောင်းရွယ်တူဆက်ဆံရေးခွဲခြားရန်ပိုမိုပျော့ပြောင်းအစီအမံရှိခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေ၏မည်ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neuroimaging သုတေသနချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြော activation အတွက်အရေးကြီးသောဘာသာဂုဏ်ထူး illuminated ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူ aligns ဘယ်လိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေအသည်းအသန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစသောအပြောင်းအလဲ၏စိတ်ခံစားမှုအတှေ့အကွုံကြောင်းအကြံပြုသုတေသနကန့်သတ်ပြီလျှင်, နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများနှင့်ဤအကူးအပြောင်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြောင်းပိုမိုသိရှိခြင်းလိုအပ်ထောက်ခံမှုနှင့်ငြမ်းများအချိန်ကိုက်နှင့်အမျိုးအစားများအကြောင်းကြားကိုကူညီလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ pubertal အကူးအပြောင်းလည်း arousal သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲဘယ်လောက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ လူငယ်များကအမြင့်ဆုံးဦးစားပေးတစ်ဦးသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအခြေအနေတွင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆွဲဆောင်မှုလုံးဝအခမဲ့ဆက်ဆံရေးကနေအကူးအပြောင်းကိုခံယူ။ ကျနော်တို့ရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစူးစမ်းကြောင်း neurodevelopmental မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ဒီလူမှုရေးအကူးအပြောင်းသို့ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအပေါ်သုတေသနပြုဖို့အဆိုပြု၎င်း၏ရှုပ်ထွေးနှငျ့အတူမကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ မိဘများနှင့်လူ့ဘာသာရပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပျဉ်ပြားဖွယ်ရှိမေတ္တာ, ဆွဲဆောင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုလူငယ်များကိုတောင်းဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဝိသေသလက္ခဏာများ, အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးတွေအကြောင်းကိုတိကျမှုသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ကြီးထွား-အထိခိုက်မခံ, အတည်ပြုအစီအမံကိုဖန်တီးရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့သို့မဟုတ်ကျားမဝိသေသလက္ခဏာ (များ၏အမျိုးအစားများကိုခိုင်မာအောင်ကိုက်ညီမှလူကြီးများထက်လျော့နည်းများပါတယ်အဖြစ်ဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းသတိထားအာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်Savin-Williams က et al, 2012 ။ ဗန် Anders, 2015) ။ တောင်မှဆက်ဆံရေး "ရင်ခုန်စရာ" ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိထူထောင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခွဲခြားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုသဘောမတူအထူးသဖြင့်လျှင်, စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, High-ပြင်းထန်မှုမိတ်ဆွေတစ်ဦး, ပလေတိုရင်ခုန်စရာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းအကြား vacillate စခွေငျးငှါအဘို့အဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးခံစားရ, ကြှနျုပျတို့တိကျစွာသူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး၏ dynamic သဘောသဘာဝကိုဖမ်းယူနိုင်မအစီအမံလိုအပ်ကိုချစ်။ ကျနော်တို့ဇီဝဗေဒအကြားရှုပ်ထွေးကြားဆက်ဆံရေးပေးထားကြောင်းကိုလည်းအသိအမှတ်မပြု လိင်, ဟော်မုန်းနှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှု, ရင်ခုန်စရာမှသက်ဆိုင်ရာ၎င်းတို့စပ်ကြားနှင့်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးအာရုံကြောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှ, ဤကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့ကြံ့ခိုင်သုတေသနဒီဇိုင်းလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအစိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း, ငါတို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဤလိုင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ကျိုးနပ်ပါစေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အစောပိုင်းရင်ခုန်စရာသွားလာရန်သိမြင်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ လုံခြုံစိတ်ချစွာနှင့်သေးသောသူတို့ (ဒါအောင်မြင်စွာလုပ်ဖို့သင့်လျော်သောထောက်ခံမှုလိုအပ်ခိုင်မာစေ et al ။ , 2014a, ခ) ။ မြီးကောင်ပေါက်တစ်မူလတန်းရည်မှန်းချက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုလမ်းညွှန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤအစောပိုင်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး (အရေးကြီးသောဝိသေသလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်နေရာတွေမှာလဲရှိတယ်Furman နှင့် Shaffer, 2003) ။ (မိဘတို့, Clinician နှင့်ကျောင်းဆရာများကဒီဧရိယာ၌သက်ဆိုင်ရာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ပါသည်, သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာ, သက်ဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏အများစုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေကြွလာFortenberry, 2014) ။ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ၏ neurodevelopmental ကျောထောက်နောက်ခံပြုနားလည်သဘောပေါက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာလဲကူညီပံ့ပိုးရန်အားထုတ်မှုအသိပေးဘို့ကြီးသောဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience နှင့်ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဘက်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံ, ကောင်းစွာစံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရှေ့တန်းမှသို့ဆယ်ကျော်သက်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏နေရာ၌မာဂျင်ကနေဆယ်ကျော်သက်လိင်ရွှေ့ဖို့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimaging အစောပိုင်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုဆုလာဘ်သို့မဟုတ် Self-ဝိသေသလက္ခဏာအပြောင်းအလဲနဲ့အတူ aligned လျှင်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအကြောင်းကြားဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ အလားတူပင်အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းခြေတစ်လှမ်းကြောင်းပေးထား ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဤအချိန်ကာလအတွင်းသုတေသန neuroimaging ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ချစ်ခြင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုး၏ကွဲပြားအာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြု untangle နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ neurodevelopmental မော်ဒယ်များတိုးချဲ့ကူညီနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်တစ်ခုခုရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် မြျှောလငျ့ အကြောင်းကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် အတှေ့အကွုံ ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအသီးသီးအမှု။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလည်းတားဆေးနည်းပညာတိုးတက်လာအကြောင်းကြားသားမွေးတယ်ဆိုတာ၏အချိန်ကိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဤကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, High-ပြင်းထန်မှုဆက်ဆံရေး၏တွန်းအားများနှင့်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲနားလည်အမျှကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုငြမ်းဖို့လိုအပ်အစီအစဉ်များနှင့်မူဝါဒများအမျိုးအစားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အပြုသဘောဘယ်နေရာတွေမှာလဲမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းပေးထားပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့မြီးကောင်ပေါက် '' မြင့်သောပြင်းထန်မှုရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျက်ကွက်ဖြစ်ပျက်မှသူတို့ကိုတားဆီးမထားဘူး။ မြီးကောင်ပေါက်မေတ္တာနှင့်လိင်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ရစေတယ်ကြသည်, ထိုသို့ပိုကောင်းဒီသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရန်ကြှနျုပျတို့အားလုံးအစေခံလိမ့်မယ်။
အလီနှင့် Dwyer, 2011
MM အလီ, DS Dwyerမြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်သက်တူရွယ်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုများခန့်မှန်း
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ , 34 (1) (2011), စစ။ 183-190, 10.1016 / j.adolescence.2009.12.008
ဆောင်းပါးဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်Scopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်း
Aron et al ။ , 2000
A. အ Aron, CC ကို-Norman, မာခ် Aron, C. McKenna, RE Heymanစုံတွဲများသည်ဝတ္ထုနှင့်နှိုးဆွသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးများတွင်အတူတူပါ ၀ င်ခြင်း
ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ , 78 (2) (2000), စစ။ 273-284, 10.1037 // 0022-3514.78.2.273
Aron et al ။ , 2005
A. အ Aron, အိပ်ချ် Fisher သည်ဒီဂျေ Mashek, G. အခိုင်ခံ့, အိပ်ချ်လီ, ll ဘရောင်းအစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ
ဂျေ Neurophysiol ။ , 94 (1) (2005), p ။ 327
Bartels နှင့် Zeki, 2004
A. အ Bartels, အက်စ် Zekiမိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
Neuroimage, 21 (3) (2004), စစ။ 1155-1166, 10.1016 / j.neuroimage.2003.11.003
Baumgartner et al ။ , 2011
အရှေ့တောင် Baumgartner, ညနေ Valkenburg, ဂျေပတေရုသမြီးကောင်ပေါက်များ၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအမူအကျင့်အပေါ်ဖော်ပြရန်နှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သက်ဆိုင်သည့်စံနှုန်းများ၏လွှမ်းမိုးမှု
Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ ကွန်ယက်အဖွဲ့, 14 (12) (2011), စစ။ 753-758, 10.1089 / cyber.2010.0510
စေ့စေ့စပ်စပ် et al ။ , 2007
LH စေ့စေ့စပ်စပ်, RE ဆန်ခါစစ်ခွဲခြား, ဂျေဖာဂူဆန်, V. Sharma ကမြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအပေါ်ကို Global အမြင်များ: အီတလီတို့, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အလားအလာ
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 369 (2007), စစ။ 1220-1231, 10.1016/S0140-6736(07)60367-5
SJ Blakemoreအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု Imaging
Neuroimage, 61 (2) (2012), စစ။ 397-406, 10.1016 / j.neuroimage.2011.11.080
Bongaarts နှင့် Blanc, 2015
ဂျေ Bongaarts, AK Blancအိမ်ထောင်စုစစ်တမ်းများကနေသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားမှာမိခင်များ၏လက်ရှိယုတ်အသက်အရွယ်ခန့်မှန်း
လူဦးရေ။ ကနျြးမာရေးမက်ထရစ်, 13 (1) (2015), p ။ 1, 10.1186/s12963-015-0058-9
Braams et al ။ , 2015
ခ Braams, အေဗန် Duijvenvoorde, JS Peper, EA ၏ Croneဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက် longitudinal ပြောင်းလဲမှု: တစ်ဆုလာဘ်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများ၏ပြည့်စုံသောလေ့လာမှု, pubertal ဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်
ဂျေ neuroscience ။ , 35 (18) (2015), စစ။ 7226-7238, 10.1523 / JNEUROSCI ။ 4764-14.2015
Brooks-ဂွန်နှင့် Furstenberg, 1986
ဂျေ Brooks-ဂွန်, FF Furstenbergဆယ်ကျော်သက်မိခင်များ၏သားသမီးများ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာသင်နှစ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ
dev ။ ဗျာ,6(3) (1986), စစ။ 224-251, 10.1016/0273-2297(86)90013-4
ဘရောင်း et al ။ , 2005
JD ဘရောင်း, မှန် CT Halpern, KL သည် L'Engleအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါသက်တူရွယ်တူအဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 36 (5) (2005), စစ။ 420-427, 10.1016 / j.jadohealth.2004.06.003
ဘရောင်း et al ။ , 2015
ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းဘရောင်း, KD Kulbarsh, ka Spencer, C. Duvaltesticular ဟော်မုန်းမှ Peripubertal ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတုံ့ပြန်စုစည်း
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 73 (2015), စစ။ 135-141, 10.1016 / j.yhbeh.2015.07.003
Burnham et al ။ , 2003
TC Burnham, JF ချပ်မန်း, PB Gray, MH McIntyre, SF Lipson, PT Ellisonကျူးလွန်, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသားများအတွက်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းများ
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 44 (2) (2003), စစ။ 119-122, 10.1016/s0018-506x(03)00125-9
buster et al ။ , 2005
je Buster, SA Kingsberg, O. Aguirre, C. ဘရောင်း, JG Breaux, အေ Buch, Cassonကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး: ခွဲစိတ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက် testosterone patch ကို
Obstet ။ Gynecol ။ , 105 (5 Pt 1) (2005), စစ။ 944-952, 10.1097 / 01.aog.0000158103.27672.0d
ကမ့်ဘဲလ် et al ။ , 2005
ဘီစီကမ့်ဘဲလ်, အိပ်ချ် Prossinger, အမ် Mbzivopubertal ရငျ့နှင့်ဇင်ဘာဘွေကျောင်းတွင်ယောက်ျားလေးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 34 (5) (2005), စစ။ 505-516, 10.1007/s10508-005-6276-7
A.1 ကမ့်ဘဲလ်oxytocin နှင့်လူ့လူမှုရေးအပြုအမူ
လူတစ်ဦး။ Soc ။ Psychol ။ ဗျာ, 14 (3) (2010), စစ။ 281-295, 10.1177 / 1088868310363594
ချိန် et al ။ , 2011
ဂျေချိန်, ဃအဲလ်ဘတ်, အယ်လ် O 'Brien, K. Uckert, အယ်လ် Steinbergသက်တူရွယ်တူများသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ပိုမိုများပြားစေသည်
dev ။ သိပ္ပံ။ , 14 (2) (2011), စစ။ F1-F10, 10.1111 / ည။ 1467-7687.2010.01035.x
Choukas-Bradley et al ။ , 2014
အက်စ် Choukas-Bradley, အမ် Giletta, အယ်လ် Widman, GL Cohen ကို, MJ Prinsteinသက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဘယ်နေရာတွေမှာမှစမ်းသပ်တိုင်းတာလွယ်ကူစွာထိခိုက်: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု
dev ။ Physcol ။ (2014), 10.1037 / a0037300
WA Collinsမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု: ဒဏ္ဍာရီထက်ပို
ဂျေ Res ။ မြီးကောင်ပေါက်။ , 13 (1) (2003), စစ။ 1-24, 10.1111 / 1532-7795.1301001
Crockett et al ။ , 2006
LJ Crockett, အမ် Raffaelli, Y.-L. Shenအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှ Self-စည်းမျဉ်းများနှင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့ချိတ်ဆက်: ရွယ်တူချင်းဖိအားနှင့်အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်လမ်းကြောင်း
ဂျေ Res ။ မြီးကောင်ပေါက်။ , 16 (4) (2006), စစ။ 503-525, 10.1111 / ည။ 1532-7795.2006.00505.x
EA ၏ Crone, RE Dahlလူမှုရေး-ကိုထိခိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုနားလည်ခြင်း
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ , 13 (9) (2012), စစ။ 636-650, 10.1038 / nrn3313
Dahl REအဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ neuroscience: ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်, သန့်စင်ခြင်း, သက်တမ်းတိုးရေး seminal မော်ဒယ်များ
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 17 (2016), စစ။ 101-102, 10.1016 / j.dcn.2015.12.016
Davis က et al ။ , 2006
SR Davis က, MJ ဗန် der Mooren, RH အဗန် Lunsen, P. Lopes, C. Ribot, ဂျေ Ribot, DW ဤသို့ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး: ခွဲစိတ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီး hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါကုသမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း patch ကို၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု
သွေးဆုံး (New York ကနယူးယော့), 13 (3) (2006), စစ။ 387-396, 10.1097 / 01.gme.0000179049.08371.c7
de Boer et al ။ , 2012
A. အ de Boer, EM ဗန် Buel, GJ Ter Horstမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်အပေါ်တစ်ဦး neurobiological ရှုထောင့်: မတ်ေတာသရုံနမ်းထက်ပို
neuroscience, 201 (2012), စစ။ 114-124, 10.1016 / j.neuroscience.2011.11.017
Dennison et al ။ , 2013
အမ် Dennison, အက်စ် Whittle, အမ်Yücel, N. Vijayakumar, အေ Kline, ဂျေ Simmons, NB Allen ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း subcortical ဦးနှောက်ရငျ့ပုံဖော်: hemisphere- ၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်လိင်-တိကျတဲ့ longitudinal အပြောင်းအလဲများ
dev ။ သိပ္ပံ။ , 16 (5) (2013), စစ။ 772-791, 10.1111 / desc.12057
စိန်နှင့် Dickenson, 2012
LM စိန်ဂျေအေ Dickensonမေတ္တာနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ neuroimaging: ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
Clin ။ Neuropsychiatry,9(2012), စစ။ 39-46
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 464 (1 ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်) (1986), စစ။ 58-65, 10.1111 / j.1749-6632.1986.tb15993.x
Edwards ကနှင့် O'Neal, 2009
DA Edwards က, JL O'Nealခံတွင်း contraceptives တံတွေး testosterone ဟော်မုန်းလျော့ကျပေမယ့်အားကစားယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်မြင့်တက်မထိခိုက်ပါဘူး
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 56 (2) (2009), စစ။ 195-198, 10.1016 / j.yhbeh.2009.01.008
Eisenegger နှင့် Naef, 2011
C. Eisenegger, အမ် NaefTestosterone နဲ့လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချ: အပြုအမူဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်စမ်းသပ်ဆဲဘောဂဗေဒပေါင်းစပ်ပြီး
ဂျေ Vis ။ Exp ။ , 49 (2011), 10.3791 / 2065
အင်္ဂလန် et al ။ , 2013
P. အင်္ဂလန်, ll ဝူ, EF1 Shaferအိမ်မထောင်မီပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားအတွက်အလိုက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း: လက်ထပ်ထိမ်းမြားထံမှဆုတ်ခွာနေအဘို့အဘယ်သို့အခန်းကဏ္ဍ?
လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှု, 50 (6) (2013), စစ။ 2075-2104, 10.1007/s13524-013-0241-1
အမ် Ernst, EE နယ်လ်ဆင်, အက်စ် Jazbec, eb လူယာ, CS ရဟန်းတော်, အီး Leibenluft, DS ထင်းရူးလူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens
Neuroimage, 25 (4) (2005), စစ။ 1279-1291, 10.1016 / j.neuroimage.2004.12.038
Ewing et al ။ , 2014
SWF Ewing, JM Houck, အေဒီ Bryanတုန့်ပြန်တားစီးနေစဉ်အတွင်းအာရုံကြော activation အန္တရာယ်များလိင်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမြီးကောင်ပေါက် '' ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်
စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ (2014), 10.1016 / j.addbeh.2014.12.007
Falk et al ။ , 2012
eb Falk, ET Berkman, MD Liebermanအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်လူဦးရေအမူအကျင့်မှအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံအုပ်စုတစ်စုလူဦးရေ-Level မီဒီယာသက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 23 (5) (2012), စစ။ 439-445, 10.1177 / 0956797611434964
Falk et al ။ , 2015
eb Falk, ကို MB ODonnell, CN Cascio, အက်ဖ် Tinney, Y. Kang, MD Lieberman, VJ Strecherself-ကတိသစ္စာပြုကျန်းမာရေးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူပြောင်းလဲမှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ (2015), p ။ 201500247
Finkelstein et al ။ , 1998
JW Finkelstein, EJ Susman, VM က Chinchilli, MR DArcangelo, SJ Kunselman, ဂျေ Schwab, HE Kulinhypogonadal မြီးကောင်ပေါက်အတွက် Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်အီစထိုဂျင်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု 1
ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ , 83 (7) (1998), စစ။ 2281-2285, 10.1210 / jcem.83.7.4961
Fisher က et al ။ , 2010
သူ Fisher သည် ll ဘရောင်း, အေ Aron, G. အခိုင်ခံ့, ဃ Mashekမေတ္တာ၌ငြင်းပယ်ခံရနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစနစ်များ
ဂျေ Neurophysiol ။ , 104 (1) (2010), စစ။ 51-60, 10.1152 / jn.00784.2009
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 64 (2) (2013), စစ။ 280-287, 10.1016 / j.yhbeh.2013.03.007
JD Fortenberryလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, ကျန်းမာဆယ်ကျော်သက်လိင်
နယူးညွှန်။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ dev ။ , 2014 (144) (2014), စစ။ 71-86, 10.1002 / cad.20061
Furman နှင့် Shaffer, 2003
ဒဗလျူ Furman, အယ်လ် Shafferဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏အခန်းကဏ္ဍကို
P. Florsheim (Ed က။ ), ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: သီအိုရီ, သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု, လောရင့် Erlbaum Associates မှထုတ်ဝေသူများ, နယူးဂျာစီပြည်နယ် (2003), စစ 3-22 ။
Furman et al ။ , 2007
ဒဗလျူ Furman, အမ်ဟို, အက်စ်အင်ဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်စရာအတွေ့အကြုံတွေအဆိုပါကျောက်တောင်လမ်းမပေါ်: ချိန်းတွေ့နှင့်ညှိနှိုင်းမှု
R. Engels, M. Kerr, H. Stattin (Eds ။ )၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ခေါင်းစဉ်များ - သူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်သူများနှင့်အုပ်စုများ၊ John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, အင်္ဂလန် (၂၀၀၇)၊ စ။ ၆၁-၈၀
Gaither နှင့် Sellbom, 2010
GA Gaither, M.1 Sellbomစကေးရှာကြံအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ: တစ်လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားနမူနာအတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု
ဂျေပုဂ္ဂိုလ်။ အကဲဖြတ်ရန်။ , 81 (2) (2010), စစ။ 157-167, 10.1207 / S15327752JPA8102_07
အေသွပ်ရည်စိမ်ဆုလာဘ်ပေးရန်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် sensitivity ကို
Curr ။ တိုက်ရိုက်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 22 (2) (2013), စစ။ 88-93, 10.1177 / 0963721413480859
Gibbs et al ။ , 2014
SJ Gibbs, DM ဖာဂူဆ, LJ Horwood, JM Bodenအစောပိုင်းမိခင်နှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးရလဒ်များ: တစ် 30 နှစ် longitudinal လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်
ဂျေ Res ။ မြီးကောင်ပေါက်။ , 25 (1) (2014), စစ။ 163-172, 10.1111 / jora.12122
Giedd နှင့် Denker, 2015
ဖြစ်မှု Giedd, AH Denkerအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: neuroimaging ကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
JP Bourguignon (Ed က။ ), အပျိုဖော်ဝင်စနဲ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက် Crosstalk, Springer (2015), စစ။ 85-96, 10.1007/978-3-319-09168-6_7
Giedd et al ။ , 2006
ဖြစ်မှု Giedd, LS Clasen, R. Lenroot, ဃ Greenstein, GL Wallace, အက်စ် Ordaz, မိသားစုဆရာဝန် Chrousosဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အပျိုဖော်ဝင်-related လွှမ်းမိုးမှု
Mol ။ cell ။ Endocrinol ။ , 254-255 (2006), စစ။ 154-162, 10.1016 / j.mce.2006.04.016
Goldenberg et al ။ , 2013
ဃ Goldenberg, Eh Telzer, MD Lieberman, အေ Fuligni, အေသွပ်ရည်စိမ်လိင်ကအန္တရာယ်များမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အာရုံကြောယန္တရားများ
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ ,6(2013), စစ။ 23-29, 10.1016 / j.dcn.2013.06.002
PB Grey က, ဘီစီကမ့်ဘဲလ်လူ့အထီး testosterone ဟော်မုန်း, pair တစုံဘွန်းနှင့် fatherhood
PT Ellison, PB Grey က (Eds ။ ), လူမှုရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်းကင်းဘရစ် MA, ဘော်စတွန်, MA (2009), စစ။ 270-293
Greenough et al ။ , 1987
WT Greenough, je က Black, CS Wallaceအတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 58 (1987), စစ။ 539-559
Guttmacher Institute ကနှင့်နိုင်ငံတကာစီစဉ်ထားမိဘအဖွဲ့ချုပ်, 2010
Guttmacher Institute နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီစဉ်ထားသောမိဘများအဖွဲ့ချုပ်အဆိုပါ Developing ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ၏လိင်နှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အချက်အလက်: အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ
Guttmacher Institute မှ, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (2010)
Guttmacher Institute မှ, 2014
Guttmacher Institute ကFact Sheet: အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး
Guttmacher Institute မှ, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (2014)
Halpern et al ။ , 1993
မှန် CT Halpern, JR Udry, ခမ့်ဘဲလ်, C.1 Suchindranလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ခန့်မှန်းအဖြစ် Testosterone နဲ့ pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတစ်ဦး panel ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Psychosom ။ Med ။ , 55 (5) (1993), စစ။ 436-447
Halpern et al ။ , 1997
မှန် CT Halpern, JR Udry, C. Suchindrantestosterone ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအတွက် coitus ၏စတင်ဟောကိန်းထုတ်
Psychosom ။ Med ။ , 59 (2) (1997), စစ။ 161-171
Halpern et al ။ , 1998
မှန် CT Halpern, JR Udry, C. Suchindranတံထွေး testosterone ဟော်မုန်း၏လစဉ်အစီအမံဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်း
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 27 (5) (1998), စစ။ 445-465, 10.1023 / A: 1018700529128
Hampton et al ။ , 2005
Hampton, ခ Jeffery, ခ McWatters, P. Smith က MRလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏သူတို့ရဲ့စတင်အပေါ်မိဘ၏မရရှိခြင်း၏နှင့်သက်တူရွယ်တူအပြုအမူဆယ်ကျော်သက်သဘောထားအမြင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
နိုင်သလား။ ဂျေ Hum ။ လိင်။ , 14 (3-4) (2005), စစ။ 105-121
ခိုင်မာစေ et al ။ , 2014a
ရှုထောင့်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ ,9(5) (2014), စစ။ 455-469, 10.1037 / 0022-3514.85.2.197
ခိုင်မာစေ et al ။ , 2014b
KP ခိုင်မာစေ, N. Kretsch, SR Moore က, ဂျေ Mendleဖော်ပြရန်ပြန်လည်သုံးသပ်: အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်းအဘို့အအန္တရာယ်အပေါ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှု
int ။ ဂျေစားပါ။ disorders ။ , 47 (7) (2014), စစ။ 718-726, 10.1002 / eat.22317
Hayford et al ။ , 2014
SR Hayford, KB Guzzo, PJ သင်တိုင်းချုပ်ခြင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိဘများ၏ decoupling? အိမ်ထောင်ရေးပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွား၏အချိန်ကိုက်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 1945-2002
မိသားစုဆက်ဆံရေး။ , 76 (3) (2014), စစ။ 520-538, 10.1111 / jomf.12114
Hazan နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, 1987
C. Hazan, P. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးကို attachment ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ် conceptualized
ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ , 52 (3) (1987), p ။ 511, 10.1037 / 0022-3514.52.3.511
TK Henschဦးနှောက် plasticity များအတွက်အရေးပါသော Bistable parvalbumin ဆားကစ်
cell, 156 (1) (2014), စစ။ 17-19, 10.1016 / j.cell.2013.12.034
Hensel et al ။ , 2015
DJ သမား Hensel, TA Hummer, LR Acrurio, TW ယာကုပ်, JD Fortenberryမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုနားလည်ရန်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 56 (2015), စစ။ 389-395, 10.1016 / j.jadohealth.2014.11.00
Herting et al ။ , 2014
MM Herting, P. Gautam, JM ပီးလ်ဘာ့ဂ်, အီးကံ, RE Dahl, ER Sowellမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်အပြောင်းအလဲများအတွက် Testosterone နဲ့ estradiol ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တစ် longitudinal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI လေ့လာမှု
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 35 (11) (2014), စစ။ 5622-5645, 10.1002 / hbm.22575
Hofferth နှင့်ရိဒ်, 2001
SL Hofferth, အယ်လ် Reidအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျောင်းပညာရေးအပေါ်အစောပိုင်းကလေးမွေးခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ
Fam ။ Plann ။ ရှုထောင့်။ , 33 (6) (2001), စစ။ 259-267
Hostinar et al ။ , 2014
အီး Hostinar, AE ဂျွန်ဆင်, MR ကို Gunnarမိဘထောက်ခံမှုကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ကြားခံ cortisol စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအတွက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်
dev ။ သိပ္ပံ။ , 18 (2) (2014), စစ။ 218-297, 10.1111 / desc.1219
TA Hummerမီဒီယာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများသက်ရောက်မှု: အဘယျသို့ neuroimaging ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရှေ့တွင်တည်ရှိသည်
နံနက်။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ , 59 (14) (2015), စစ။ 1790-1806, 10.1177 / 0002764215596553
ဂျိမ်း et al ။ , 2012
ဂျေယာကုပျ, BJ အဲလစ်, GL Schlomer, ဂျေ Garberအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေမှလိင်-တိကျတဲ့လမ်းကြောင်း: တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်-ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု
dev ။ Psychol ။ , 48 (3) (2012), စစ။ 687-702, 10.1037 / a0026427
Kalnin et al ။ , 2011
AJ Kalnin, CR Edwards က, Y. ဝမ်, WG ကို Kronenberger, TA Hummer, KM Mosier, Mathewsတစ်ဦးစိတ်ပိုင်း Stroop တာဝန်စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ကို Activation မီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုထိတွေ့မှုများနှင့်ရန်လို-နှောင့်အယှက်အပြုအမူများ၏အပြန်အလှန်အခန်းကဏ္ဍ
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res .: Neuroimaging, 192 (1) (2011), စစ။ 12-19, 10.1016 / j.pscychresns.2010.11.005
ကံ et al ။ , 2010
ML ကံ, YA Cheng, NS Landale, SM McHaleမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်ပြောင်းလဲမှု longitudinal ခန့်မှန်း
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 46 (1) (2010), စစ။ 25-31, 10.1016 / j.jadohealth.2009.05.002
Kennett et al ။ , 2012
DJ သမား Kennett, TP Humphrey, KE1 Schultzလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များနှင့်မိသားစု, လိင်ပညာရေး, မီဒီယာနှင့်ရွယ်တူများ၏သက်ရောက်မှု
လိင်ပညာရေး။ , 12 (3) (2012), စစ။ 351-368, 10.1080 / 14681811.2011.615624
Kerpelman et al ။ , 2016
JL Kerpelman, အေဒီ McElwain, JF Pitmann က FM ရေ Adler-Baederအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု: ဆယ်ကျော်သက် '' မိမိကိုယ်မိမိ၏သဘောထားအမြင်များနှင့်မိဘကလေးကြားဆက်ဆံရေးကိစ္စ
လူငယ် Soc ။ , 48 (1) (2016), စစ။ 101-125, 10.1177 / 0044118 × 1347961
Kunkel et al ။ , 2005
ဃ Kunkel, K. Eyal, K. Finnerty, အီး Biely, အီး Donnersteinတီဗီ42005 အပေါ်လိင်: တစ်ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကအစီရင်ခံစာ
ဂျေဟင်နရီ (။ Ed က), ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း Menlo Park, CA: ကယ်လီဖိုးနီးယား (2005)
ဂျေ LeDouxအဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်ကြောက်ရွံ့လျက်, amygdala
cell ။ Mol ။ Neurobiol ။ , 23 (4) (2003), စစ။ 727-738, 10.1023 / A: 1025048802629
Longmore et al ။ , 2009
MA Longmore, AL Eng, PC ကို Giordano, WD Manningမိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်ခြင်း
ဂျေအိမ်ထောင်ရေးမိသားစု, 71 (4) (2009), စစ။ 969-982, 10.1111 / j.1741-3737.2009.00647.x
TM အလိုအလျောက်မတ်ေတာသညျoxytocin, လှုံ့ဆျောမှုနှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 119 (2013), စစ။ 49-60, 10.1016 / j.pbb.2013.06.011
Mathews နှင့် Hamilton က, 2009
တီဂျေ Mathews, Hamilton က BEနှောင့်နှေးကလေးမွေး: ပိုမိုအမျိုးသမီးများနေ့နောက်ပိုင်းဘဝရဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးရှိခြင်းနေ။ ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ, ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများယူအက်စ်အေ (2009) အတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာ
ဂျေ Mendleဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလေ့လာနေအသစ်လမ်းညွန်အခြိနျဇယား pubertal ကျော်လွန်
Curr ။ တိုက်ရိုက်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 23 (3) (2014), စစ။ 215-219, 10.1177 / 0963721414530144
Miller က et al ။ , 2001
ဘီစီ Miller ကခ Benson, ka Galbraithမိသားစုဆက်ဆံရေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အန္တရာယ်: တစ်သုတေသနပြုပေါင်းစပ်
dev ။ ဗျာ, 21 (1) (2001), စစ။ 1-38, 10.1006 / drev.2000.0513
တဖန်မောရှေအား-Kolko et al ။ , 2016
EL မောရှေသည်-Kolko, EE Forbes မဂ္ဂဇင်း, အက်စ်တက်လွင်ပြင်, ဃ Fraser, Ke Keenan, AE Guyer, AE Hipwellအာရုံကြောအနိမ့်ဝင်ငွေအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့စနစ်များ, လူနည်းစုလူငယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မိခင်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
Psychoneuroendocrinology, 66 (2016), စစ။ 130-137, 10.1016 / j.psyneuen.2016.01.009
EE နယ်လ်ဆင်, အီး Leibenluft, အီးလူယာ, DS ထင်းရူးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်
Psychol ။ Med ။ , 35 (02) (2005), စစ။ 163-174, 10.1017 / S0033291704003915
နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2016
EE နယ်လ်ဆင်, JM Jarcho, AE Guyerလူမှု Re-orientation ကိုနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ်ဦးတိုးချဲ့နှင့် updated အမြင်
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 17 (2016), စစ။ 118-127, 10.1016 / j.dcn.2015.12.008
Numan နှင့် Stolzenberg, 2009
အမ် Numan, DS1 Stolzenbergကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများထိန်းချုပ် dopamine အာရုံကြောစနစ်များနှင့်အတူ Medial preoptic ဧရိယာ interaction က
တပ်ဦး။ Neuroendocrinol ။ , 30 (1) (2009), စစ။ 46-64, 10.1016 / j.yfrne.2008.10.002
Nutsch et al ။ , 2014
VL Nutsch, RG Will, T. Hattori, DJ သမား Tobiansky, JM Dominguezအဖော်ရှာ-သွေးဆောင်အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှုလိင်အတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးမှု
neuroscience ။ လက်တ။ , 579 (2014), စစ။ 92-96, 10.1016 / j.neulet.2014.07.021
Nutsch et al ။ , 2016
VL Nutsch, RG Will, CL Robison, JR Martz, DJ သမား Tobiansky, JM Dominguezအဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos နှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine receptors ၏ Colocalization: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 10 (2016), 10.3389 / fnbeh.2016.00075
ကအေဲနျဂြီက de Mack et al ။ , 2011
ZA ကအေဲနျဂြီက de Mack, BG Moore, အက်စ် Overgaauw, ခGüroglu, RE Dahl, EA ၏ Cronetestosterone အဆင့်ဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်တိုးချဲ့ ventral striatum activation နှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 1 (4) (2011), စစ။ 506-516, 10.1016 / j.dcn.2011.06.003
Ortigue et al ။ , 2010
အက်စ် Ortigue, အက်ဖ် Bianchi-Demicheli, N. Patel က C. Frum, JW Lewis ကမတ်ေတာ၏ Neuroimaging: FMRI metaလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာသစ်ကိုရှုထောင့်ဆီသို့သက်သေအထောက်အထား -analysis
ဂျေလိင်။ Med ။ ,7(11) (2010), စစ။ 3541-3552, 10.1111 / j.1743-6109.2010.01999.x
ဆောင်းပါးဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်CrossRefScopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်း
Ott et al ။ , 2014
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ် MA Ott, GS Sucato, ကော်မတီမြီးကောင်ပေါက်အဘို့စျေးကြီးသော
ကလေးအထူးကု, 134 (4) (2014), စစ။ e1257-e1281, 10.1542 / peds.2014-2300
မိဘ et al ။ , 2003
မိဘ, G. အ Teilmann, အေ Juul, NE Skakkebaek, ဂျေ Toppari, JP1 Bourguignon ASသာမန်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ precocity ၏အသက်ကန့်သတ်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်: ကမ္ဘာတဝှမ်းမူကွဲ, လောကခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်အပြောင်းအလဲများ
Endocr ။ ဗျာ, 24 (5) (2003), စစ။ 668-693, 10.1210 / er.2002-0019
Parkes et al ။ , 2011
A. အ Park, အမ် Henderson, ဃ Wight, C. နစ်ဆင်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အစောပိုငျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသလဲ?
ရှုထောင့်။ လိင် Reprod ။ ကနျြးမာရေး, 43 (1) (2011), စစ။ 30-40, 10.1363 / 4303011
SJ Peak, တီဂျေ Dishion, EA ၏ Stormshak, WE Moore က, JH Pfeiferမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်လူမှုရေးဖယ်: အာရုံကြောယန္တရားများဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်သက်တူရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံ
Neuroimage, 82 (2013), စစ။ 23-34, 10.1016 / j.neuroimage.2013.05.061
Peper နှင့် Dahl, 2013
JS Peper, RE Dahlအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်: ဟော်မုန်းတက်လာခြင်း - အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဦးနှောက်-အပြုအမူ interaction က
Curr ။ တိုက်ရိုက်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 22 (2) (2013), စစ။ 134-139, 10.1177 / 0963721412473755
ပေတရုနှင့် Valkenburg, 2016
ဂျေပေတရုသည် pm တွင် Valkenburgမြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်း: သုတေသန 20 နှစ်ပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်
ဂျေလိင် Res ။ (2016), 10.1080 / 00224499.2016.1143441
ပီတာ et al ။ , 2015
အက်စ်ပီတာ, DJ သမား Jolles, AC အဗန် Duijvenvoorde, EA ၏ Crone, JS PeperTestosterone နဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အရက်အသုံးပြုမှုအတွက် amygdala-orbitofrontal cortex ဆက်သွယ်မှုများအကြားအဆိုပါ link ကို
Psychoneuroendocrinology, 53 (2015), စစ။ 117-126, 10.1016 / j.psyneuen.2015.01.004
JH Pfeifer, CL Masten III ကို, WE Moore က, TM အလိုအလျောက် Oswald သည် JC Mazziotta, အမ် Iacoboni, အမ် Daprettoဝင်ရောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှခုခံ, အန္တရာယ်များအပြုအမူများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု reactivity ကိုအတွက်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများ
အာရုံခံဆဲလျ, 69 (5) (2011), စစ။ 1029-1036, 10.1016 / j.neuron.2011.02.019
Potard et al ။ , 2008
C. Potard, R. Courtois, အီး Ruschမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
အီးယူအာရ်။ ဂျေစျေးကြီးသော Reprod ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, 13 (3) (2008), စစ။ 264-270, 10.1080 / 13625180802273530
စျေးနှုန်းနှင့် Hyde, 2008
MN စျေး, JS Hydeတစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအန္တရာယ်မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ခန့်မှန်းနှစ်ခုထက် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်တဲ့အခါ
ဂျေလူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ , 38 (8) (2008), စစ။ 1059-1071, 10.1007/s10964-008-9351-2
ဂျေ Res ။ လူတစ်ဦး။ , 38 (3) (2004), စစ။ 256-279, 10.1016/s0092-6566(03)00067-9
Romeo et al ။ , 2002
RD Romeo, HN Richardson က CL Siskအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အထီးဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရငျ့: တစ်အပြုအမူအလားအလာ recasting
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 26 (3) (2002), စစ။ 381-391, 10.1016/s0149-7634(02)00009-x
RD Romeoအပျိုဖော်ဝင်စ: neurobehavioural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကာလ
ဂျေ Neuroendocrinol ။ , 15 (12) (2003), စစ။ 1185-1192, 10.1111 / ည။ 1365-2826.2003.01106.x
Roney နှင့် Simmons, 2013
JR Roney, ZL Simmonsသဘာဝကရာသီသံသရာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ဟော်မုန်းခန့်မှန်း
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 63 (4) (2013), စစ။ 636-645, 10.1016 / j.yhbeh.2013.02.013
Rosenblitt et al ။ , 2001
JC Rosenblitt, အိပ်ချ် Soler, အရှေ့တောင်ဂျွန်ဆင်, DM Quadagnoအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် Sensation ရှာခြင်းနှင့်ဟော်မုန်း: link ကိုရှာဖွေစူးစမ်း
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 40 (3) (2001), စစ။ 396-402, 10.1006 / hbeh.2001.1704
စယ် et al ။ , 2001
ဂျေအေစယ်, AJ ဒေါက်ဂလပ်, CD ကို Ingramကိုယ်ဝန်နှင့်နို့ကာလအတွင်းအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine စနစ်များအတွက်သားဖွားသပ္ပါယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့အဦးနှောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။ ခြုံငုံသုံးသပ်
ဦးနှောက်သုတေသန 133 (2001), စစအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 1-38, 10.1016/S0079-6123(01)33002-9
Sørensen et al ။ , 2012
K. Sørensen, အေ Mouritsen, အယ်လ် Aksglaede, က CP Hagen, အက်စ်အက်စ် Mogensen, အေ Juulpubertal အချိန်ကိုက်အတွက်မကြာမီကလောကခေတ်ရေစီးကြောင်း: ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင်၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါအဘို့အဂယက်ရိုက်
Horm ။ res ။ Paediatr ။ , 77 (3) (2012), စစ။ 137-145, 10.1159 / 000323361
Santor et al ။ , 2000
DA Santor, ဃ Messervey, V.1 Kusumakarဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ရွယ်တူချင်းဖိအား, ကျော်ကြားမှုနှင့်ကိုက်ညီတိုင်းတာခြင်း: ကျောင်းကစွမ်းဆောင်ရည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုခန့်မှန်း
ဂျေလူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ , 29 (2) (2000), စစ။ 163-182, 10.1023 / A: 1005152515264
Savin-Williams က et al ။ , 2012
RC Savin-Williams က, K. Joyner, G. အ Riegerပျံ့နှံ့နှင့်လူငယ်လူကြီးစဉ်အတွင်း Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ၏တည်ငြိမ်မှုကို
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 41 (1) (2012), စစ။ 103-110, 10.1007 / s10508-012-9913-y က
Schlegel နှင့်ဘယ်ရီ, 1991
A. အ Schlegel, အိပ်ချ် Barry III ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: An Anthropological စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
Free Press မှနယူးယောက် (1991)
A. အ Schlegelဆယ်ကျော်သက်လိင်များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
PR စနစ် Abramson (Ed က။ ), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား, လိင်ယဉ်ကျေးမှု, ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, ချီကာဂို, IL (1995), စစ။ 177-194
Schulz နှင့် Sisk, 2016
KM Schulz, CL Siskဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးလုပ်ရပ်တွေကို
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ (2016), 10.1016 / j.neubiorev.2016 ။ 07.03
Sedgh et al ။ , 2015
G. အ Sedgh, LB အသေးစိတ်, အေ Bankole, MA Eilers, အက်စ် Singh ကနိုင်ငံပေါင်းဖြတ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, မွေးဖွားနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနှုန်း: အဆင့်ဆင့်နှင့်မကြာသေးမီကခေတ်ရေစီးကြောင်း
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 56 (2) (2015), စစ။ 223-230, 10.1016 / j.jadohealth.2014.09.007
Shifren et al ။ , 2006
JL Shifren, SR Davis, M. Moreau, A. Waldbaum, C. Bouchard, L. DeRogatis, S. O'Neillသဘာဝကျကျသွေးဆုံးအမျိုးသမီး hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါကုသမှုများအတွက် testosterone patch ကို: အရငျးနှီး NM1 လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို
သွေးဆုံး, 13 (5) (2006), စစ။ 770-779, 10.1097 / 01.gme.0000227400.60816.52
Sisk နှင့် Foster, 2004
CL Sisk, DL Fosterအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ
နတ်။ neuroscience ။ ,7(10) (2004), စစ။ 1040-1047, 10.1038 / nn1326
Sisk နှင့် Zehr, 2005
CL Sisk, JL ZehrPubertal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး
တပ်ဦး။ Neuroendocrinol ။ , 26 (3) (2005), စစ။ 163-174, 10.1016 / j.yfrne.2005.10.003
Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ , 38 (2016), စစ။ 63-68, 10.1016 / j.conb.2016.02.00
ပီးလ်ဘာ့ဂ် et al ။ , 2014
JM ပီးလ်ဘာ့ဂ်, TM အလိုအလျောက် Olino, EE Forbes မဂ္ဂဇင်း, RE Dahlမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်: pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတခြိမ်းခြောက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲသလဲ,
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 86-95, 10.1016 / j.dcn.2014.01.004
Suleiman နှင့် Deardorff, 2015
AB Suleiman, ဂျေ Deardorffဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကွိမျမြားစှာရှုထောင်: တစ်ဖော်ပြရန်, အရည်အသွေးရှုထောင့်
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 44 (3) (2015), စစ။ 765-775, 10.1007 / s10508-014-0394-z
Tackett et al ။ , 2015
JL Tackett, KW Reardon, K. Herzhoff, အီးစာမျက်နှာ-သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, KP ခိုင်မာစေ, RA, ယောသပ်သည်psychopathology externalizing လူငယ်အတွက် Estradiol နဲ့ Cortisol interaction က
Psychoneuroendocrinology, 55 (2015), စစ။ 146-153, 10.1016 / j.psyneuen.2015.02.014
Takesian နှင့် Hensch, 2013
AE Takesian, TK Henschဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖြတ်ပြီး plasticity / တည်ငြိမ်မှုဟန်ချက်ညီ
prog ။ ဦးနှောက် Res ။ , 207 (2013), စစ။ 3-34, 10.1016/B978-0-444-63327-9.00001-1
Eh Telzer, AJ Fuligni, MD Lieberman, အမ် Miernicki, အေသွပ်ရည်စိမ်မြီးကောင်ပေါက် '' သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေမှအာရုံကြော sensitivity ကို modulates
လူမှုသိမြင်မှု။ အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience ။ nsu064 (2014), 10.1093 / စကင်ဖတ်စစ်ဆေး / nsu064
Eh TelzerDopaminergic ဆုလာဘ် sensitivity ကိုဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်သည် ventral striatum activation ၏ယန္တရားအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 17 (2016), စစ။ 57-67, 10.1016 / j.dcn.2015.10.01
စပါး et al ။ , 2012
N. စပါး, အမ် Shapiro, Eh Telzer, KL Humphreyမိခင်မှ Amygdala တုံ့ပြန်မှု
dev ။ သိပ္ပံ။ , 15 (3) (2012), စစ။ 307-319, 10.1111 / j.1467-7687.2011.01128.x
van de Bongardt et al ။ , 2014
ဃဗန်က de Bongardt, အိပ်ချ်က de Graaf, အီး Reitz, အမ်Dekovićမိဘများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တူရွယ်တူများ၏စံနှုန်းများနှင့်ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့အကြား longitudinal ဆက်နွယ်မှုကိုကြီးကြပ်သူအဖြစ်မိဘများ
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 55 (3) (2014), စစ။ 388-393, 10.1016 / j.jadohealth.2014.02.017
Vermeersch et al ။ , 2008
အိပ်ချ် Vermeersch, G. အ T'sjoen, J.-M. Kaufman, ဂျေ VinckeEstradiol, testosterone ဟော်မုန်း, differential ကိုအသင်းအဖွဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ရန်လိုခြင်းနှင့် Non-ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ
Psychoneuroendocrinology, 33 (7) (2008), စစ။ 897-908, 10.1016 / j.psyneuen.2008.03.016
Vermeersch et al ။ , 2009
အိပ်ချ် Vermeersch, G. အ T'sjoen, ဂျေ Kaufman, ဂျေ Vinckeဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်လိင် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းများနှင့်အမူအကျင့်တားစီး (bis) နှင့်အမူအကျင့်ကို Activation (BAS) အကြားဆက်ဆံရေး
လူတစ်ဦး။ တစ်ဦးချင်းကွဲပြားခြားနား။ , 47 (1) (2009), စစ။ 3-7, 10.1016 / j.paid.2009.01.034
ဗစ်တာနှင့် Hariri, 2015
EC အဗစ်တာ, AR Haririမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်
dev ။ Psychopathol ။ (2015), စစ။ 1-17, 10.1017 / s0954579415001042
K. ဝေါ်လဲန်လိင်နှင့်အခြေအနေတွင်: ဟော်မုန်းနှင့်မျောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 40 (2) (2001), စစ။ 339-357, 10.1006 / hbeh.2001.1696
ကောင်းစွာ et al ။ , 2006
K. ကောင်းပြီ, အမ် Collumbian, အီး Staymaker, အက်စ် Singh က Z. Hodges, O. Patel ကအခြေအနေတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာရှုထောင့်
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet လိင်။ Reprod ။ ကနျြးမာရေး SER ။ (2006)
Werker နှင့် Hensch, 2015
JF Werker, TK Henschမိန့်ခွန်းအမြင်အတွက်အရေးပါကာလ: သစ်ကိုလမ်းညွန်
အမ်း။ ဗျာ Psychol ။ , 66 (1) (2015), p ။ 173, 10.1146 / annurev-psyche-010814-015104
Westoff ။ , 2003
DHS နှိုင်းယှဉ်အစီရင်ခံစာများ, ORC Macro, Calverton, MD (2003)
Whalen et al ။ , 2013
PJ Whalen, အိပ်ချ် Raila, R. Bennett က, အေ Mattek, အေဘရောင်း, ဂျေတေလာ, Palmer ကစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ neuroscience နှင့်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ: amygdala-prefrontal interaction က၏အခန်းကဏ္ဍကို
စိတ်လှုပ်ရှားမှုဗျာ,5(1) (2013), စစ။ 78-83, 10.1177 / 1754073912457231
Whittle et al ။ , 2014
အက်စ် Whittle, JG Simmons, အမ် Dennison, N. Vijayakumar, O. Schwartz, ကို MB Yap, NB Allen ကတစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု: positive မိဘအုပ်ထိန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုခန့်မှန်း
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 7-17, 10.1016 / j.dcn.2013.10.006
et al ။ , 2015 လိမ့်မည်
RG Will, VL Nutsch, JM Turner, T. Hattori, DJ သမား Tobiansky, JM Dominguezအဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ Astrocytes အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုဖက်ရှင်အတွက်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် modulate
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 129 (1) (2015), p ။ 68, 10.1037 / bne0000026
Wolak et al ။ , 2007
ဂျေ Wolak, K. Mitchell က, ဃ Finkelhorမလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကအမျိုးသားနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်
ကလေးအထူးကု, 119 (2) (2007), စစ။ 247-257, 10.1542 / peds.2006-1891
ဗန် Anders, 2015
SM ဗန် Andersလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကို ကျော်လွန်. : လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ configurations သီအိုရီမှတဆင့်ကျားမ / လိင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 44 (5) (2015), စစ။ 1177-1213, 10.1007/s10508-015-0490-8
Zimmerman et al ။ , 2013
Y. Zimmerman, MJC Eijkemans, HJT Coelingh Bennink, MA Blankenstein, BCJM Fauserကျန်းမာတဲ့အမျိုးသမီး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်ပေါင်းစပ်ပါးစပ်ဓတေား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
လူ့ Reprod ။ Update ကို (2013), စစ။ 76-105, 10.1093 / humupd / dmt038